ကနေဒါနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Canada မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 60°N 95°W﻿ / ﻿60°N 95°W﻿ / 60; -95
ဆောင်ပုဒ်: A Mari Usque Ad Mare(လက်တင်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "O Canada"
အသိအမှတ်ပြု ဒေသန္တရ ဘာသာစကားများ
Inuktitut, Inuinnaqtun, Cree, Dëne Sųłiné, Gwich’in, Inuvialuktun, Slavey and Tłįchǫ Yatiì
ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီနှင့် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်
• ဗြိတိသျှ မြောက်အမေရိက အက်ဥပဒေ
ဇူလိုင် ၁၊ ၁၈၆၇
• ဝက်မင်စတာ စတက်ကျုဥပဒေ
ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၁၉၃၁
• ကနေဒါ အက်ဥပဒေ
ဧပြီ ၁၇၊ ၁၉၈၂
၉,၉၈၄,၆၇၀ (အဆင့်: ၂)
၈.၉၂ (891,163 km²/344,080 mi²)
• ၂၀၂၁ ခန့်မှန်း
၃၁,၂၄၁,၀၃၀ (အဆင့် - ၃၆)
၃.၂/km² (၈.၃/sq mi) (အဆင့် - ၂၁၉)
$၁.၃၀၀ trillion (အဆင့် - ၁၄)
$၃၉,၀၉၈ (အဆင့် - ၁၃)
$၁.၄၉၉ trillion (အဆင့် - အဆင့် ၉)
$၄၅,၀၈၅ (အဆင့် - အဆင့် ၁၈)
အလွန်မြင့် · ၄
ကနေဒီးယန်း ဒေါ်လာ (CAD) (CAD)
(UTC−၃.၅ to −၈)
• နွေရာသီ (DST)
(UTC−၂.၅ to −၇)
ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြောက်အမေရိကတိုက် မြောက်ဖက်ပိုင်းရှိ ပြည်နယ် ၁၀ ခုနှင့် နယ်မြေ ၃ ခု ပါဝင်သော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ နှင့် ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာတို့မှတဆင့် မြောက်ဖက် အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ အထိ ကျယ်ဝန်းပြီး စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၃.၈၅ သန်း (စတုရန်းကီလိုမီတာ ၉.၉၈ သန်း) မျှ ကျယ်ဝန်းသည်။ စုစုပေါင်း ဧရိယာအားဖြင့် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကုန်းမြေဧရိယာအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္တမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ နယ်စပ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ်မျဉ်း ဖြစ်သည်။
ယခု ကနေဒါဟု ခေါ်တွင်သော နေရာမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကပင် ရှေးဦးလူမျိုးများ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၅ ရာစု နှောင်းပိုင်းတွင် ဗြိတိသျှနှင့် ပြင်သစ်တို့က ထိုဒေသရှိ အတ္တလန္တိတ် ကမ်းရိုးတန်းတွင် ကိုလိုနီနယ်မြေများ တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ပဋိပက္ခ အမြောက်အမြား ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ မြောက်အမေရိကနယ်မြေများကို ရရှိခြင်း ဆုံးရှုံးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၁၈ ရာစု နှောင်းပိုင်းတွင် ယနေ့ ကနေဒါ နိုင်ငံ နေရာသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တော့သည်။ ၁၈၆၇ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်တွင် ဗြိတိသျှ မြောက်အမေရိက ဥပဒေ အရ ကိုလိုနီနယ်မြေ သုံးခု ပေါင်းစပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ကနေဒါဖက်ဒရယ်ဒိုမီနီယံကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။။ ထိုမှစ၍ ပြည်နယ် များ နယ်မြေများဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်သည့် ဒိုမီနီယံအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ဝက်မင်စတာစတက်ကျု ဥပဒေ ၁၉၃၁ ဖြင့် ဗြိတိသျှတို့က ကနေဒါနိုင်ငံအား လုံးဝနီးပါး လွတ်လပ်ရေး ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၈၂ ခုနှစ် ကနေဒါဥပဒေအရ ဗြိတိသျှပါလီမန် အပေါ်တွင် ဥပဒေရေးရာ မှီခိုမှု အကြွင်းအကျန် အားလုံးကို ဖြတ်တောက်ပြီး အပြည့်အဝ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမြောက် အဲလိဇဘက် ဘုရင်မ သည် လက်ရှိ နိုင်ငံ၏အကြီးအကဲ ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင် ရုံးသုံးဘာသာစကား ၂ မျိုး အသုံးပြုသော နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူမျိုးပေါင်းအစုံဆုံး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုစနစ် အစုံဆုံးရှိသော နိုင်ငံများတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ နိုင်ငံပေါင်း များစွာမှ လူအများအပြား ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေ ၃၅ သန်းခန့် ရှိသည်။ နိုင်ငံ၏ တိုးတက်သော စီးပွားရေးစနစ်မှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၁ ခုမြောက် အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး အလျှံပယ်ရှိနေသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသော နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး ကွန်ယက်များပေါ်တွင် အဓိကရပ်တည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ကာလကြာရှည်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆက်ဆံရေးသည် စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်တွင် သိသာစွာ သက်ရောက်မှု ရှိသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ လည်း ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေအားဖြင့် ကြည့်လျှင် တကမ္ဘာလုံးတွင် အဆင့် ၁၁ ရှိပြီး လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု ညွှန်းကိန်းအရ ကြည့်လျှင်မူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် ၈ ရှိသည်။ အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ အရပ်ဖက် ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု၊ လူနေမှုဘဝ စံနှုန်း၊ စီးပွားရေး လွတ်လပ်မှု နှင့် ပညာရေးတို့တွင် တကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ ဖြင့် ထိပ်ဆုံး အဆင့်များတွင် ပါဝင်လျှက် ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အဖွဲ့ နှင့် ဖရန်ကိုဖုန်းနီ အဖွဲ့ တို့တွင် ပါဝင်သည်။ ထို့ အပြင် အဓိက နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များနှင့် အစိုးရ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် အစုဖွဲ့ထားသော အဖွဲ့အစည်း များ ဖြစ်သည့် နေတိုးအဖွဲ့၊ ဂျီအိတ်၊ ဆယ်နိုင်ငံအဖွဲ့ ၊ ဂျီတွမ်တီး၊ မြောက်အမေရိက လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အေးပက် ဖိုရမ်တို့တွင် ပါဝင်သည်။
၂.၂ ဥရောပမှ ကိုလိုနီပြုခြင်း
၂.၃ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း
၂.၄ ၂၀ ရာစု အစောပိုင်း
၄ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး
၄.၂ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနှင့် စစ်ရေး
၄.၃ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ
၄.၄ ပြည်နယ် နှင့် ဒေသများ
၅.၁ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ
၆ လူဦးရေ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ပုံ
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အမည်မှည့်ခေါ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သီအိုရီ အမျိုးမျိုးဖြင့် ရှင်းလင်းပြသရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်း ယခုအခါ စိန့်လောရင့်စ် အီရိုကွာရန်၏ စကားလုံး ကာနာတာ မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု အများက လက်ခံထားကြသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ကျေးရွာ သို့မဟုတ် နေထိုင်ရာ နေရာ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။  ၁၅၃၅ ခုနှစ်တွင် ယနေ့ခေတ် ကွီးဘက်မြို့တော် ဒေသ နေရာတွင် ရှေးဦးနေထိုင်သူများက ပြင်သစ် စွန့်စားရှာဖွေသူ ဂျက် ကာတီယာ အား ထို စကားလုံးကို အသုံးပြု၍ စတာဒါကိုနာ ကျေးရွာနေရာသို့ လမ်းပြ ခဲ့ကြသည်။  နောင်တွင် ကာတီယာမှ ကနေဒါ ဆိုသော စကားလုံးကို အသုံးပြု၍ ထိုကျေးရွာကိုသာ မကဘဲ ထိုကျေးရွာ၏ အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ ဒွန်နာကိုနာ အုပ်ချုပ်သော နေရာ အားလုံးအား ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ ၁၅၄၅ မှ အစပြု၍ ဥရောပရှိ စာအုပ်များနှင့် မြေပုံများတွင် ထိုဒေသကို ကနေဒါဟု စတင် ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြလေသည်။
၁၇ ရာစုနှစ် နှင့် ၁၈ ရာစုနှစ် အစောပိုင်းများတွင် ကနေဒါ မှာ စိန့်လောရင့် မြစ်တလျှောက်တွင် တည်ရှိသော နယူးဖရန့်ဒေသကို ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသည်။  ၁၇၉၁ တွင် ထိုဒေသမှာ အထက်ကနေဒါနှင့် အောက်ကနေဒါ ဟုခေါ်သော ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ဒေသ နှစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုဒေသများကို ကနေဒါများ ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်မှာ ၁၈၄၁ ခုနှစ် ဗြိတိသျှ ကနေဒါ ပြည်နယ် ဟု ပေါင်းစပ်ခဲ့သည့် အချိန် အထိပင် ဖြစ်သည်။  ၁၈၆၇ ခုနှစ်တွင် ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း အဖြစ် ပေါင်းစည်းပြီးနောက် ကနေဒါ ဆိုသော အမည်ကို နိုင်ငံ အသစ်၏ တရားဝင် အမည် အဖြစ် မှတ်ယူခဲ့ကြပြီး ဘုရင့် လက်အောက်ခံ ဒိုမီနီယံ အဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ကနေဒါ အက်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်မှ ကနေဒါနိုင်ငံ အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် အမျိုးသားနေ့ ရုံးပိတ်ရက်ကို ဒိုမီနီယံနေ့မှ ကနေဒါ နေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။  ဒိုမီနီယံ ဟူသော အခေါ်အဝေါ်မှာ ဖက်ဒရယ် အစိုးရကို ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးများမှ ကွဲပြားအောင် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင်မှ ဒိုမီနီယံ ဟူသော အခေါ်အဝေါ် အစား ဖက်ဒရယ် ဟူသော အခေါ်အဝေါ်ဖြင့် အစားထိုး အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ခေတ် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ရှေးဦးနေထိုင်သူများတွင် ဖတ်စ်နေးရှင်း၊ အီးနွစ် နှင့် မဲတစ် လူမျိုးများ ပါဝင်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ ၁၇ ရာစုခန့်က ဖတ်စ်နေးရှင်း နှင့် အီးနွစ် လူမျိုးတို့ ဥရောပမှ လာရောက် အခြေချ နေထိုင်သူတို့နှင့် ပေါင်းဖက်ရာမှ ဆင်းသက်လာသော လူမျိုးများ ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသန နှင့် မျိုးရိုးဗီဇ လေ့လာဆန်းစစ်ချက် တို့အရ ဘီစီ ၁၃,၀၀၀ မှ ၁၂,၀၀၀ ကြား ကာလမှစ၍ မြောက်ပိုင်း ယူကွန်း ဒေသတွင်လည်းကောင်း၊ ဘီစီ ၇,၅၀၀ ခုနှစ်မှစ၍ တောင်ပိုင်း အွန်တေရီအို ဒေသတွင် လည်းကောင်း လူသားတို့ ရှိနေခဲ့သည့် လက္ခဏာများကို တွေ့ရသည်။ ထို ပထမဆုံး အခြေချ နေထိုင်သူများမှာ ဘဲရင်း ရေလက်ကြားတွင် ကုန်းမြေအဖြစ် အာရှ နှင့် အမေရိကကို ဆက်စပ်နေခဲ့သော နေရာကို ဖြတ်ကျော်၍ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေလီယို အင်ဒီးယန်း ရှေးဟောင်းသုတေသန နေရာများ ဖြစ်သော ကျီးအို လတာပြင် နှင့် ငါးပြာဂူတို့မှာ ကနေဒါရှိ လူတို့ အခြေချ နေထိုင်ရာ အစောဆုံး နှစ်နေရာ ဖြစ်သည်။ ကနေဒါရှိ ရှေးဦး အခြေချ နေထိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် အတည်တကျ နေထိုင်မှု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ ရှုပ်ထွေးသော လူ့အဖွဲ့စည်း ဝါစဉ်များ နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ကွန်ယက်များ အစရှိသည့် သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ရှိကြသည်။ ဥရောပ စွန့်စား ရှာဖွေသူတို့ ၁၅ ရာစု နှင့် ၁၆ ရာစု အစောပိုင်းတို့တွင် ရောက်ရှိလာပြီးနောက် အချို့သော ယဉ်ကျေးမှုများ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်းသုတေသန စူးစမ်းရှာဖွေမှုများမှ တဆင့်သာ သိရှိရသည်။ 
ဥရောပသားတို့ ပထမဆုံး အခြေချ နေထိုင်ချိန်တွင် ရှေဦးနေထိုင်သူတို့၏ လူဦးရေမှာ ၂ သိန်းမှ ၂ သန်း အတွင်း ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပြီး ကနေဒါ ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့ နှင့် ဆိုင်သော တော်ဝင် ကော်မရှင်ကမူ ၅ သိန်းဟု လက်ခံ ထားသည်။ ဥရောပ သားတို့၏ ကိုလိုနီပြုမှု အကျိုးဆက် အဖြစ် ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့မှာ အသစ်ရောက်ရှိလာသော တုပ်ကွေး၊ ဝက်သက်၊ ရေကျောက် အစရှိသော ၎င်းတို့ အနေနှင့် သဘာဝ အားဖြင့် ခုခံ စွမ်းအား မရှိသော ရောဂါများ၏ ကူးစက် ပျံ့နှံ့မှုကို ခံစားရပြီး ဥရောပသားတို့ ရောက်ရှိပြီး ရာစုနှစ် တစ်ခု အကြာတွင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လူဦးရေ ကျဆင်းခဲ့သည်။
ဥရောပ ကနေဒါသားတို့ နှင့် ဖတ်စ်နေးရှင်း နှင့် အီနွစ် အစရှိသော လူမျိုးတို့၏ အစောပိုင်း ဆက်ဆံရေးမှာ ပဋိပက္ခ လုံးဝ မရှိဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း အတော်ပင် ပြေလည်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ကနေဒါ ဘုရင် အသိုင်းအဝိုင်း နှင့် ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့မှာ ဥရောပသားတို့ ကိုလိုနီစနစ် ဖော်ဆောင်သည့် အချိန်တွင် စတင်၍ ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ ပြုခဲ့ကြပြီး အီနွစ်တို့မှာ ဥရောပသားတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် အကန့်အသတ် ရှိသည်။ ၁၈ ရာစု နှောင်းပိုင်းမှ အစပြု၍ ဥရောပ ကနေဒါသားတို့က ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့ကို ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အတွင်း ဝင်ရောက်ပေါင်းစပ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ထိုသို့ အားထုတ်မှုများမှာ ၁၉ ရာစု နှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းတို့တွင် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ခဲ့ပြီး အတင်းအကျပ် ပေါင်းစည်းစေခြင်း နှင့် ရွှေ့ပြောင်းစေခြင်းများကို ပြုခဲ့ကြသည်။
ဥရောပသားတို့ ကိုလိုနီ ပြုရန် ပထမဆုံး ကြိုးပမ်းခြင်းမှာ အေဒီ ၁၀၀၀ ခန့်က နော့စ်လူမျိုးတို့ နယူးဖောင်လန်ဒေသရှိ လန်စီ မီးဒိုးတွင် ခဏတာမျှ အခြေချ နေထိုင်ခြင်းမှ အစပြုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဥရောပသားတို့၏ ထပ်မံ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း မပြုတော့သည်မှာ ၁၄၉၇ ခုနှစ် အီတလီ ရေကြောင်းသွား ဂျွန်ကာဘော့မှ အင်္ဂလန် အတွက် ကနေဒါ၏ အတ္တလန္တိတ် ကမ်းရိုးတန်းကို စူးစမ်း ရှာဖွေသည့် အချိန်အထိ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၁၆ ရာစု အစောပိုင်းတွင် ဘက်စ် လူမျိုးများ နှင့် ပေါ်တူဂီ သင်္ဘောသားများ အတ္တလန္တိတ် ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် ဝေလငါး ဖမ်းရန် နှင့် ငါးဖမ်းရန် စခန်းများတည်ဆောက်ကြသည်။ ၁၅၃၄ တွင် ပြင်သစ်လူမျိုး စူးစမ်း ရှာဖွေသူ ဂျက်ကာတီယာမှ စိန့်လောရင့်မြစ်တလျှောက် စူးစမ်းရှာဖွေရှာဖွေခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်တွင် အမြင့် ၃၃ပေ (၁၀ မီတာ) မျှ မြင့်မားပြီး "ပြင်သစ်ဘုရင် သက်တော်ရှည်ပါစေ" ဟူသော စာတမ်း ရေးထိုးထားသည့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို စိုက်ထူခဲ့ကာ ထိုနယ်မြေကို ပြင်သစ်ဘုရင် ဖရန်စစ် ၁ ၏ အမည်ဖြင့် သိမ်းယူခဲ့သည်။
၁၅၈၃ ခုနှစ်တွင် ပထမမြောက် အဲလိဇဘက် ဘုရင်မ၏ တော်ဝင် အခွင့်အာဏာ လွှဲအပ်ခံရသူ ဆာ ဟမ်ဖရေး ဂီးလ်ဘတ်မှ နယူးဖောင်လန်မှ စိန့်ဂျွန်မြို့ကို မြောက်အမေရိက၏ ပထမဆုံးသော အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီနယ်မြေ အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည်။  ၁၆၀၃တွင် ပြင်သစ် စွန့်စားရှာဖွေသူ တစ်ဦးဖြစ်သော ဆင်မျူရယ် ဒီ ချက်ပလိန် ရောက်ရှိလာပြီး ပထမဆုံးသော ဥရောပသားတို့၏ အခြေချ နေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်သော ပေါ့တ်ရွိုင်ရယ်မြို့ကို ၁၆၀၅ တွင် လည်းကောင်း နှင့် ကွီးဗက်စီးတီးကို ၁၆၀၈ တွင် လည်းကောင်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နယူးဖရန့်ဟု ခေါ်သော မြောက်အမေရိကရှိ ပြင်သစ်ကိုလိုနီနယ်မြေများတွင် အခြေချ နေထိုင်သူများတွင် ကနေဒီယန် များက စိန့်လောရင့်မြစ်ဝှမ်းတွင် လည်းကောင်း၊ အကေးဒီးယန်းများက ယနေ့ခေတ် မရိန်တိုင်း ဟုခေါ်သော နေရာတွင် လည်းကောင်း အခြေချခဲ့ကြပြီး သားမွှေးကုန်သည်များနှင့် ကက်သလစ် သာသနာပြုများကမူ ဂရိတ်လိတ်ဒေသ၊ ဟတ်ဒ်ဆန်ပင်လယ်အော်၊ မစ္စစ္စပီ ရေဝေကုန်းတန်း နှင့် လူဝီစီးယားနား အထိ စူးစမ်းရှာဖွေ သွားလာခဲ့ကြသည်။ ၁၇ ရာစု အလယ်ပိုင်းတွင် မြောက်အမေရိက သားမွှေးကုန်သွယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားသူများကြားတွင် ဘီဗာစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၁၆၁၀ မှစ၍ အင်္ဂလိပ်တို့သည် နယူးဖောင်လန်ရှိ ကျူးပစ် နှင့် ဖယ်ရီလန်း တို့တွင် ကိုလိုနီနယ်မြေများ ထပ်မံ ထူထောင်ခဲ့သည်။ များမကြာမီတွင် တောင်ဘက်ရှိ ကိုလိုနီ နယ်မြေ ၁၃ ခုဟု ခေါ်ကြသော ယခုလက်ရှိ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တည်ရှိရာ ကိုလိုနီနယ်မြေများကို ဆက်လက် ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၁၆၈၉ ခုနှစ်နှင့် ၁၇၆၃ ခုနှစ်ကြားတွင် မြောက်အမေရိက ကိုလိုနီနယ်မြေများ၌ စစ်ပွဲ ၄ ခု ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းစစ်ပွဲများမှာ ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲဟု ခေါ်သော မြောက်အမေရိက စစ်ပွဲများတွင် ပါဝင်သော စစ်ပွဲများဖြစ်သည်။ ၁၇၁၃ အုထရက်ချ် စာချုပ် နှင့် ၁၇၆၃ ပဲရစ်စာချုပ်တို့ကြောင့် ကုန်းမြေမကြီး ဖြစ်သော နိုဗာ စကိုးရှားအား ကနေဒါသို့ ပေးအပ်လိုက်ရကာ ဗြိတိသျှတို့၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်သို့ ရောက်လာခဲ့ပြီး နယူးဖရန့်၏ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများကိုလည်း ခုနစ်နှစ် စစ်ပွဲ အပြီးတွင် ဗြိတိန်သို့ ပေးအပ်လိုက်ရသည်။
ပန်းချီဆရာ ဘင်ဂျမင်ဝက်စ်၏ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝုဖ် သေဆုံးခြင်း (၁၇၇၁) ပန်းချီကားမှာ ကွီးဗက်စီးတီးရှိ အေဘရာဟမ်လွင်ပြင် တိုက်ပွဲတွင် ဂျိမ်းဝုဖ် ကျဆုံးခြင်းကို ခြယ်မှုန်း သရုပ်ဖော်ထားသည်။
၁၇၆၃ တော်ဝင်ကြေငြာချက်ဖြင့် ကွီးဗက်ပြည်နယ် ကို နယူးဖရန့်မှ ခွဲထုတ် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဘရက်တန် အိုင်းလန်း အငူ ကိုလည်း နိုဗာစကိုးရှား သို့ ပူးပေါင်း ထည့်သွင်းခဲ့သည်။  ယခု ပရင့်စ် အက်ဒ်ဝပ်ကျွန်း ဟု ခေါ်သော စိန့်ဂျွန်ကျွန်းသည် ၁၇၆၉ တွင် သီးသန့်ကိုလိုနီ နယ်မြေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။  ကွီးဗက် ရှိ ပဋိပက္ခများကို ရှောင်လွှဲရန် အတွက် ဗြိတိသျှ ပါလီမန်မှ ကွီးဗက်အက်ဥပဒေကို ၁၇၇၄ တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ကွီးဗက် နယ်မြေကို ဂရိတ်လိတ် နှင့် အိုဟိုင်းယိုး မြစ်ဝှမ်းအထိ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ၎င်းမှ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ ကက်သလစ် ယုံကြည်မှုနှင့် ပြင်သစ် တရားမ ဥပဒေတို့ကို ပြန်လည် ပေါ်ထွန်းစေခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ၁၇၇၅ ခုနှစ် အမေရိကန် တော်လှန်ရေး မဖြစ်ပွားမီတွင် ကိုလိုနီ နယ်မြေ ၁၃ ခုရှိ နေထိုင်သူများအား ဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်များကို လောင်မြိုက်စေခဲ့သည်။
၁၇၈၃ ပဲရစ်စာချုပ်မှ အမေရိကန် လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ် ပြုခဲ့ပြီး ဂရိတ်လိတ်ဒေသ၏ တောင်ဘက်ရှိ (မြောက်ဘက်မပါ) ထပ်မံ တိုးချဲ့ထားသော နယ်မြေများကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အသစ်သို့ ပေးအပ်လိုက်ရသည် မရိန်တိုင်းရှိ လွိုင်ရယ်လစ်စ် တို့၏ အခြေချနေထိုင်ရာ နေရာများကို ပြန်လည် စုစည်းရာတွင် နယူးဘရန်းဝစ်အား နိုဗာ စကိုးရှားမှ ခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် စကားပြောသော ကွီးဗက်ရှိ လွိုင်ရယ်လစ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အနေဖြင့် ၁၇၉၁ ဖွဲ့စည့်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အက် အရ နောင်တွင် ကွီးဗက် ဖြစ်လာမည့် ပြင်သစ်စကားပြောသည့် ကနေဒါ အောက်ပိုင်း နှင့် နောင်တွင် အွန်တေးရီးအိုး ဖြစ်လာမည့် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကနေဒါ အထက်ပိုင်းတို့ကို ခွဲခြားခဲ့ကာ ဒေသ တစ်ခုချင်းစီကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်သည့် လွှတ်တော်များ တည်ထောင်စေခဲ့သည်။.
ပန်းချီဆရာ ရောဘတ် ဟဲရစ်၏ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်း၏ ဖခင် (၁၈၈၄) ပန်းချီကားတွင် ၁၈၆၄ ခုနှစ် ချားလော့တောင်း နှင့် ကွီးဗက် ကွန်ဖရင့်တို့ ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်နေပုံကို ရေးဆွဲထားသည်။
ကနေဒါဒေသများမှာ ၁၈၁၂ ခုနှစ် ဗြိတိနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၏ စစ်ပွဲများတွင် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်အပြီးတွင် ၁၈၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဗြိတိန်နိုင်ငံ နှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့မှ လူပေါင်း မြောက်များစွာတို့ ပြောင်းရွှေ့ အခြေချရန် ရောက်ရှိလာ ခဲ့သည်။ ၁၈၂၅ ခုနှစ် နှင့် ၁၈၄၆ ခုနှစ် ကြားတွင် ဥရောပမှ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူပေါင်း ၆၂၆,၆၂၈ ဦး ကနေဒါ ဆိပ်ကမ်းများသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်း ရှိခဲ့သည်။ ထိုလူများတွင် အိုင်ယာလန် အစားအစာပြတ်လပ်မှု ကပ်ဘေးမှ ထွက်ပြေးလာသူများနှင့် စကော့တလန်ကုန်းမြင့်မှာ ဖိအားသုံး ရွှေ့ပြောင်းစေမှုကြောင့် နေရာပျောက်ခဲ့သော ဂေးလစ်စကားပြော စကော့လူမျိုးများ ပါဝင်သည်။ ကူးစက်ရောဂါများကြောင့် ၁၈၉၁ ခုနှစ် မတိုင်မီ ကနေဒါသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသော ဥရောပသားတို့၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းကြား သေဆုံးခဲ့ ကြသည်။ 
၁၈၃၇တွင် ဖြစ်ပွားသော မအောင်မြင်ခဲ့သည့် ပုန်ကန်မှု အပြီးတွင် တာဝန်ယူနိုင်မည့် အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရန် အာသီသ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်တွင် ဒါဟမ် အစီရင်ခံစာမှ တာဝန်ယူနိုင်မည့် အစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် နှင့် ပြင်သစ် ကနေဒီယန်တို့အား အင်္ဂလိပ် ယဉ်ကျေးမှု အတွင်း သွတ်သွင်းရန် ထောက်ခံအားပေး ခဲ့သည်။  ၁၈၄၀ ပြည်ထောင်စု အက်မှ ကနေဒါဒေသများကို ကနေဒါပြည်နယ် အဖြစ် ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ မြောက်အမေရိကန် ပြည်နယ် များတွင် တာဝန်ယူနိုင်မည့် အစိုးရကို ၁၈၄၉ တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၈၄၆ ခုနှစ် အော်ရီဂွန် စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်တွင် ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်တို့၏ အော်ရီဂွန် နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှု အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး လတ္တီကျု ၄၉ ဒီဂရီ တလျှောက် အနောက်ဘက်သို့ နယ်နိမိတ်ကို ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် ၁၈၄၉ ခုနှစ်တွင် ဗန်ကူးဗားကျွန်း နှင့် ၁၈၅၈ ခုနှစ် တွင်ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ အသီးသီးရှိ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီများ တည်ထောင်ရန် လမ်းစတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် ချဲ့ထွင်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၈၆၇ခုနှစ် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ တည်ထောင်သည်မှ အစပြု၍ ကနေဒါရှိ ပြည်နယ်များနှင့် ဒေသများ တိုးပွားပြောင်းလဲလာခြင်းကို ဖော်ပြထားသော ရုပ်ရှင် မြေပုံ
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ကွန်ဖရင့်အချို့ ကျင်းပပြီးနောက် ၁၈၆၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အက်ဖြင့် ကနေဒါ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကို ၁၈၆၇ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်တွင် တည်ထောင်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး အစပိုင်းတွင် အွန်တေရီအို၊ ကွီးဗက်၊ နိုဗာ စကိုးရှား နှင့် နယူးဘရန်းဝစ် ပြည်နယ် ၄ ခု ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကနေဒါမှ ရူးပတ်လန်း နှင့် အနောက်မြောက်ဒေသတို့ကို ထိန်းချုပ်ပြီး အနောက်မြောက်ဒေသများ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မဲတစ်တို့၏ မကျေနပ်မှုကြောင့် မြစ်နီသူပုန်ထမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ၁၈၇၀ ဇူလိုင်လတွင် မာနီတိုဘာ ပြည်နယ် ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။  ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ နှင့် ဗန်ကူးဗားကျွန်း တို့မှာ ၁၈၆၆ တွင် ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီး ၁၈၇၁ တွင် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကာ ပရင့်စ်အက်ဒဝပ် ကျွန်းကမူ ၁၈၇၃ တွင် ပေါင်းစည်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါတီ အစိုးရမှ အခြေတည်စ ကနေဒါ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်ရန် စည်းကြပ်ခွန် ကောက်ခံမည့် အမျိုးသားရေး ပေါ်လစီ တစ်ရပ်ကို ကနေဒါ ပါလီမန်တွင် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်သွယ် သွားလာနိုင်ရန် တိုက်ကြီးကို ဖြတ်သန်းသွားမည့် ရထားလမ်း ၃ခု (ကနေဒါ ပစိဖိတ် ရထားလမ်း အပါအဝင်) ဖောက်လုပ်ရန်အတွက် ကမကထ ပြုမည့် အစီအစဉ်၊ ပရေရီ မြက်ခင်းပြင်များနှင့် အခြေချ နေထိုင်ရာ နေရာများ ဆက်သွယ်နိုင်ရန် အတွက် ဒိုမီနီယံ မြေယာ ဥပဒေ၊ ထိုဒေသတွင် အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်မြဲရန် အတွက် အနောက်မြောက် မြင်းစီး ရဲအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ပါလီမန်မှ သဘောတူ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၁၈၉၈ ခုနှစ် အနောက်မြောက် ဒေသအတွင်း ကလုန်ဒိုက်ဒေသသို့ ရွှေရှာရန် လူအများအပြား သွားရောက်ကြခြင်း အတွက် ပါလီမန်မှ ယူကွန်း ဒေသကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ လစ်ဘရယ်ပါတီ၏ ဝန်ကြီးချုပ် ဝေးလ်ဖရစ် လော်ရီယာ၏ အစိုးရမှ ဥရောပသား ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ များကို ပရေရီမြက်ခင်းပြင် ဒေသများတွင် အခြေချရန်အတွက် အားပေးသည့် အနေဖြင့် အယ်လ်ဘာတာ နှင့် ဆာစကက်ချဝမ် တို့အား ပြည်နယ်များ အဖြစ် ၁၉၀၅ ခုတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၂၀ ရာစု အစောပိုင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၁၇ ခုနှစ် ဗိုင်မီ တောင်ရိုး တိုက်ပွဲတွင် ကနေဒါ စစ်သားများအား မာ့ခ် ၂ တင့်ကားနှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်။
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း အက်ဥပဒေအရ ဗြိတိန်မှ ကနေဒါ၏ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ထိန်းချုပ်ထားဆဲ ဖြစ်သဖြင့် ၁၉၁၄ ခုနှစ် စစ်ကြေငြာသည့် အခါတွင် ကနေဒါနိုင်ငံအား ပထမကမ္ဘာစစ် အတွင်းသို့ အလိုအလျောက် ပါဝင်စေခဲ့သည်။ ဆန္ဒအလျောက် စစ်ထဲသို့ ဝင်သူများအား အနောက်ဘက် စစ်မျက်နှာသို့ ပို့လွှတ်ခဲ့ပြီး နောင်တွင် ကနေဒါ တပ်မကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ကာ ၎င်းအဖွဲ့မှာ ဗိုင်မီတောင်ရိုး တိုက်ပွဲနှင့် အခြားသော အဓိက တိုက်ပွဲများတွင် အဓိက ကျသော နေရာမှ ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ် တွင် ပါဝင်သော ကနေဒါ စစ်သား ၆၂၅,၀၀၀ ဦးတွင် ၆၀,၀၀၀ ခန့်မှာ ကျဆုံးခဲ့ပြီး ၁၇၂,၀၀၀ ခန့်မှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။ ယူနီယံနစ်ပါတီ အစိုးရက စစ်တပ်၏ တစ်စထထက် တစ်စ လျော့နည်းလာသေသာ စစ်သည်အင်အားကို တိုးပွားလာစေရန် အတွက် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို တင်သွင်းရန် ကြိုးစားသည့် အခါတွင် ပြင်သစ်စကားပြော ကွီးဗက် နယ်သားတို့၏ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး ၁၉၁၇ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ စစ်မှုရေးရာ အက်ဥပဒေကြောင့် စစ်မှုမထမ်း မနေရ အခြေအနေကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး ကွီးဗက်မြို့ ပြင်ပမှ ပြင်သစ်ဘာသာစကားပြော ကျောင်းများ ပြဿနာ နှင့် အခြားသူများနှင့် အလွန်အမင်း သီးသန့်ဖြစ်နေသော ပြင်သစ်စကားပြော ကနေဒါနိုင်ငံသားများ ပြဿနာများလည်း ပါဝင်ကြကာ လစ်ဘရယ် ပါတီကို ၂ ခြမ်းကွဲစေ ခဲ့သည်။ ၁၉၁၉ တွင် ကနေဒါသည် နိုင်ငံပေါင်းချုပ် အသင်းကြီးသို့ ဗြိတိန်နှင့် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံ အနေနှင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၃၁ ခု ဝက်မင်စတာ စတက်ကျု ဥပဒေမှ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ခြင်းကို ထပ်ဆင့် အတည်ပြု ပေးခဲ့သည်။
၁၉၄၄ ခု ဇွန်လ နော်မန်ဒီ တိုက်ပွဲ အတွင်းတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ဗော်ဆဲလ် တောင်ပိုင်း၌ ကနေဒါ စစ်သားများကို ရှားမင်းတင့်ကားဖြင့် တွေ့ရပုံ
၁၉၃၀ခုနှစ်များ၏ အစောပိုင်း ကနေဒါ စီးပွားပျက်ကပ်ကြီး အတွင်းတွင် ကနေဒါ၏ စီးပွားရေး ကျဆင်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် ခက်ခဲမှုများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုများကို တုံ့ပြန်သည့် အနေနှင့် ဆာစကက်ချဝမ်ရှိ ဓနသဟာယ သမဝါယမ ဖက်ဒရေးရှင်းမှ လူမှုဖူလုံရေးကို နိုင်ငံတော်မှ တာဝန်ယူသည့် နိုင်ငံ ဖြစ်လာစေမည့် လိုအပ်ချက်များ ကို (တော်မီ ဒေါက်ဂလပ်စ်မှ စတင်ကာ) ၁၉၄၀ ခုနှစ်များနှင့် ၁၉၅၀ ခုနှစ်များအတွင်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ လစ်ဘရယ် အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဝီလီယမ် လိုင်ယွန် မက်ကင်ဇီ ကင်း၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် ဆဌမမြောက် ဂျော့ခ်ဘုရင်မှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဂျာမနီကို ဗြိတိန်အပြီး ၇ ရက် အကြာတွင် စစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ကနေဒါ စစ်တပ် ယူနစ်များသည် ၁၉၃၉ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိကြသည်။
အားလုံး ခြုံကြည့်မည် ဆိုလျှင် ကနေဒါ နိုင်ငံသား တစ်သန်းကျော် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း စစ်တပ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ကြပြီး ၄၂,၀၀၀ ဦးခန့် သေဆုံးကာ ၅၅,၀၀၀ ခန့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။  ကနေဒါ တပ်ဖွဲ့များသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်၏ အရေးပါသော တိုက်ပွဲများဖြစ်သော ၁၉၄၂ ခုနှစ် အတွင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့သော ဒရက်ပ် စီးနင်းတိုက်ပွဲ၊ ၁၉၄၄ ခုနှစ်အတွင်း အီတလီသို့ မဟာမိတ်တပ်များ ချင်းနင်းဝင်ရောက်ခြင်း၊ နော်မန်ဒီ ကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ နော်မန်ဒီတိုက်ပွဲ နှင့် စကောက်တိုက်ပွဲ တို့တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ နယ်သာလန် နိုင်ငံ သိမ်းပိုက်ခံရစဉ်တွင် ကနေဒါမှ ဒတ်ချ် ဘုရင်ကို ခိုလှုံခွင့် ပေးခဲ့သဖြင့် နယ်သာလန်မှ နာဇီဂျာမနီ လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် အဓိက ပံ့ပိုးပေးသူ တစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ဖော်ပြခဲ့သည်။ စစ်အတွင်း တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် စစ်အတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ တရုတ် နှင့် ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု စစ်တပ်များအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး တိုးတက် လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၄ ခုနှစ် ကွီးဗက်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရ အမိန့်အတွက် ပြဿနာ ထပ်မံ ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း စစ်အပြီးတွင် ကနေဒါ၌ ကြီးမားသော စစ်တပ် တစ်ခုနှင့် ခိုင်မာသော နိုင်ငံ စီးပွားရေး ကျန်နေရစ် ခဲ့သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ရီဒေါခန်းမ၌ ဘုရင်ခံချုပ် တျူးနစ်ဗိုင်းကောင့် အလက်ဇန္ဒား (အလယ်)မှ နယူးဖောင်လန်နှင့် ကနေဒါတို့ ပေါင်းစပ်မှု အပြီးသတ် ဥပ​ဒေမူကြမ်းကို လက်ခံ ရယူစဉ်
စီးပွားပျက်ကပ်ကြီးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာကြောင့် နယူးဖောင်လန် ဒိုမီနီယံသည် ၁၉၃၄ တွင် အစိုးရကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံ အုပ်ချုပ်သော ကိုလိုနီ နယ်မြေတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခါးသီးသော ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ၂ ခု အပြီးနောက် နယူးဖောင်လန် နေထိုင်သူများက ၁၉၄၉ တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသို့ ပြည်နယ်တစ်ခု အဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် မဲပေး ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြသည်။
စစ်အပြီး ကနေဒါ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် လစ်ဘရယ် အစိုးရ အဆက်ဆက်၏ ပေါ်လစီများကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံသားတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ အသစ်တစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကာ ၁၉၆၅ တွင် ယခု အသုံးပြုနေသော မေပယ်လ်ရွက် အလံကို စတင် အသုံးပြုခြင်း၊  ၁၉၆၉တွင် ရုံးသုံး ဘာသာစကား အဖြစ် အင်္ဂလိပ် နှင့် ပြင်သစ် ၂ ဘာသာကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊  ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ ရောနှောယှက်နွယ်နေသော ဝါဒကို ၁၉၇၁ တွင် တည်ထောင်ကျင့်သုံးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်လာကြသည်။ ဆိုရှယ် ဒီမိုကရေစီ ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ဖြစ်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ကနေဒါ ပင်စင်စနစ် ၊ ကျောင်းသားများအား ငွေချေးခြင်း ကိုလည်း ပြည်နယ်အစိုးရများ မှ တဆင့် တည်ထောင် ကျင့်သုံး လာခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကွီးဗက် နှင့် အယ်လ်ဘာတာ တို့မှ ၎င်းတို့၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်များ အတွင်းသို့ ထိုအစီအစဉ်များ ဝင်ရောက်လာခြင်းကို ကန့်ကွက် ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ညီလာခံများ အကြိမ်ကြိမ် ကျင်းပခဲ့ခြင်း ၏ ရလဒ် အနေဖြင့် ၁၉၈၂ တွင် ကနေဒါ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှ လွှဲပြောင်း ရယူခဲ့ပြီး အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်မှု ဆိုင်ရာ ပဋိဉာဏ် စာတမ်းကိုလည်း စတင် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ တွင် ဖက်ဒရယ် အစိုးရနှင့် အကြိမ်ကြိမ် ညှိနှိုင်းပြီးနောက် နူနာဗု သည် ကနေဒါ၏ တတိယမြောက် ဒေသ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များ၏ အသံတိတ်တော်လှန်ရေး မှတဆင့် ကွီးဗက်၌ နက်ရှိုင်းသော လူမှုရေး နှင့် စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ခေတ်သစ် အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုများ မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ အစွန်းရောက်သော ကွီးဗက် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (အက်ဖ်အယ်လ်ကျူ) မှ ၁၉၇၀တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် ပြန်ပေးဆွဲမှုများ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပြီး အောက်တိုဘာ အရေးအခင်းကို စတင် ဖြစ်ပွားရန် မီးမွှေးခဲ့သည်။ ကွီးဗက် ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်သော ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားသူ များ၏ ပါတီ ကီဗက်ကွာ သည် ၁၉၇၆ တွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရပြီး မအောင်မြင်သော ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ၁၉၈၀တွင် ကျင်းပကာ ခွဲထွက်ရန် ကြိုးပမ်းမှု ကျရှုံးခဲ့သည်။ ကွီးဗက် အမျိုးသားရေးဝါဒကို မိချ်လိတ် သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခြေခံ ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုသည် ၁၉၉၀ တွင် ကျရှုံးခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ကွီးဗက်တွင် ကီဗက်ကွာ အုပ်စု ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အနောက်ပိုင်းဒေသတွင် ကနေဒါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပါတီကို အားကောင်း လာစေခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဒုတိယမြောက် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ၌ ကွီးဗက် သီးသန့် အချုပ်အခြာ အာဏာ နယ်မြေ အဖြစ် တည်ရှိရေးမှာ ကန့်ကွက်မဲ ၅၀.၆ ရာနှုန်း နှင့် ထောက်ခံမဲ ၄၉.၄ ရာနှုန်း ဖြင့် ကပ်၍ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။  ၁၉၉၇ တွင် တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ ပြည်နယ် တစ်ခုချင်းအလိုက် မိမိ ဆန္ဒဖြင့် ခွဲထွက်ခြင်းမှာ အခြေခံ ဥပဒေကြောင်း အရ တရားမဝင် ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ရှင်းလင်းချက် အက်ဥပဒေကို ပါလီမန်မှ အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရန်အတွက် ညှိနှိုင်းရမည့် လိုအပ်ချက်များကို ချပြခဲ့သည်။ 
ကွီးဗက်၏ ခွဲထွက်ရေး လှုပ်ရှားမှု အပြင် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များနှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များတွင် ပြဿနာပေါင်း မြောက်များစွာက ကနေဒါ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သည်။ ထို ပြဿနာများတွင် ကနေဒါ၏ သမိုင်းကြောင်း၌ အကြီးမားဆုံးသော အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု ဖြစ်သည့် ၁၉၈၅ ခုနှစ် အဲယားအိန္ဒိယ၏ လေကြောင်း ခရီးစဉ် အမှတ် ၁၈၂ ဖောက်ခွဲခံရခြင်း၊  ကျောင်းသူများကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်သော ၁၉၈၉ ခုနှစ် အီကိုးလ် ပိုလီတက်ခနစ် တက္ကသိုလ်တွင် သေနတ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်မှု အစိုးရ နှင့် ရှေးဦးနေထိုင်သူ တို့ အကြား ပထမဆုံးအကြိမ် အကြမ်းဖက်ထိတွေ့မှု အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည့်  ၁၉၉၀ အိုကာ အရေးအခင်း  စသည်တို့လည်း ပါဝင်သည်။ ကနေဒါသည် အမေရိကန် ဦးဆောင်သော မဟာမိတ် တပ်ဖွဲ့များ၏ ပင်လယ်ကွေ့ စစ်ပွဲ၌ ၁၉၉၀ တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ယခင် ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ယူအင်န် ပရိုဖော် စစ်ဆင်ရေး အပါအဝင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ် အချို့၌ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကနေဒါသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံသို့ တပ်ဖွဲ့များ ပို့လွှတ်ခဲ့သော်လည်း အမေရိကန် ဦးဆောင်သည့် အီရတ်အား ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် ဖြစ်ပွားသော စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု၏ ဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရသော်လည်း များသောအားဖြင့် ပြန်လည် တိုးတက်လာ နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါ တပ်ဖွဲ့များသည် နေတိုးအဖွဲ့ ဦးဆောင်သော လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ်အား ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အပြင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် အလယ်များ အတွက် အီရတ်နိုင်ငံအတွင်း ထကြွမှုများ ဖြစ်သည့် အိုက်အက်စ် တို့ကို တိုက်ခိုက်သည့် တိုက်ပွဲများတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပထဝီဝင်
ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြောက်အမေရိကတိုက်ကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများကို နေရာယူထားပြီး တောင်ဘက်တွင် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ကုန်းမြေ နယ်စပ် ရှိကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကြား ကုန်းမြေ နယ်နိမိတ် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အလက်စကာ ပြည်နယ် သည် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် အရှေ့ဘက်ရှိ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာမှ အနောက်ဘက် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အထိ ဆန့်တန်း တည်ရှိနေကာ မြောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ ရှိသည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်မူ ဂရင်းလန်ကျွန်း တည်ရှိသည်။ ရေထု အပါအဝင် စုစုပေါင်း ဧရိယာ အားဖြင့် ကြည့်မည် ဆိုပါက ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကုန်းမြေဧရိယာ အနေဖြင့် ကြည့်မည် ဆိုပါက ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စတုတ္ထမြောက် အကြီးဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကွာခြားမှု ရှိရခြင်းမှာ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ရေကန် အမြောက်အများ ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေကန်အားလုံး၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။  ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြောက်လတ္တီကျု ၄၁ ဒီဂရီ မှ ၈၄ ဒီဂရီကြား၊ အနောက် လောင်ဂျီကျု ၅၂ ဒီဂရီမှ ၁၄၁ ဒီဂရီ ကြားတွင် တည်ရှိသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တစိတ်တပိုင်းကကို ရိုက်ကူးထားသော ဂြိုဟ်တု ဓာတ်ပုံ။ တိုင်ဂါသစ်တောများကို ကနေဒီယန်ရှီးလ် ပေါ်တွင် အနှံ့အပြား တွေ့ရသည်။ ရေခဲနှင့် တန်ဒြာများမှာ အာတိတ်ဘက်တွင် ထင်ရှားစွာ တွေ့ရသည်။ ရေခဲမြစ်များကို ကနေဒီယန် ရော့ကီးတောင်တန်း နှင့် ကမ်းရိုးတန်း တောင်ကုနန်းများတွင် တွေ့ရသည်။ ပြန့်ပြူးပြီး မြေဩဇာ ကောင်းမွန်သော ပရေရီမြက်ခင်းပြင်များက စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်။ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဂရိတ်လိတ်များမှ တဆင့် စိန့်လောရင့်မြစ် မြစ်ဖျားခံ စီးဆင်းလာပြီး မြေနိမ့်ပိုင်းတွင် ကနေဒါလူဦးရေ အများစု နေထိုင်ကြသည်။
၁၉၂၅မှစ၍ ကနေဒါသည် အာတိတ်ဒေသ၏ အနောက် လတ္တီကျု ၆၀ ဒီဂရီ နှင့် အနောက် လောင်ဂျီကျု ၁၄၁ ဒီဂရီကြားကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြေငြာ ခဲ့သော်လည်း ထိုကြေငြာချက်ကို နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ် မပြုပေ။ ကနေဒါသည် ကမ္ဘာ၏ မြောက်ဖျားစွန်းတွင် နေထိုင်သူများ ရှိရာ နေရာ ဖြစ်ပြီး အယ်လ်စမီးယားကျွန်း၏ မြောက်ဖျားပိုင်း မြောက်လတ္တီကျု ၈၂.၅ ဒီဂရီ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှ ၅၀၈မိုင် (၈၁၇ ကီလိုမီတာ) အကွာအဝေး တွင် ကနေဒါ စစ်တပ်၏ တပ်စခန်း တည်ရှိသည်။ ကနေဒါ၏ အာတိတ်ဒေသ နေရာ အများစုကို ရေခဲများ နှင့် အစဉ်အေးခဲနေသော နက်ရှိုင်းမြေလွှာ များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျှက် ရှိသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်လျားဆုံးသော ကမ်းရိုးတန်း ရှိရာ နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အရှည် ၁၂၅,၅၇၀ မိုင် (၂၀၂,၀၈၀ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှည်လျားသည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် နယ်နိမိတ်မှာလည်း ကမ္ဘာ့ အရှည်လျားဆုံးဖြစ်ပြီး ၅,၅၂၅မိုင်(၈,၈၉၁ ကီလိုမီတာ) မျှ ရှည်လျားသည်။
နောက်ဆုံး ရေခဲခေတ် ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ကနေဒါရှီးလ် ပေါ်ရှိ တိုင်ဂါ သစ်တော အပါအဝင် ထင်ရှားသော သစ်တော ဒေသ ၇ မျိုး ရှိသည်။  ကနေဒါတွင် ကြီးမားသော ရေကန်ပေါင်း ၃၁,၇၀၀ ကန် ရှိပြီး အခြား မည်သည့်တိုင်းပြည် တွင်မျှ ထိုမျှလောက် များများစားစား မရှိဘဲ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေချိုများ၏ အစိတ်အပိုင်း အတော်များများ ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကနေဒါ ရော့ကီးတောင်တန်း နှင့် ကမ်းရိုးတန်း တောင်ကုန်းများတွင် ရေချို ရေခဲမြစ် များ ရှိသည်။ ကနေဒါသည် ဘူမိဗေဒအားဖြင့် အပြောင်းအလဲ များသော နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ငလျင် မကြာခဏ လှုပ်တတ်ကာ မီးတောင်ရှင် များလည်း ရှိသည်။ မီးတောင်များတွင် ထင်ရှားသည်မှာ မီဂါတောင်၊ ဂါရီဘော်ဒီတောင်၊ ကေလေးတောင် နှင့် အက်ဒီဇာ မီးတောင်များ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၇၇၅ ခုနှစ် ဆဲ့စ် မီးတောင်ကတော့ ပေါက်ကွဲခြင်းသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အဆိုးရွားဆုံးသော သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ရင်ဆိုင်ရခြင်း ဖြစ်ပြီး နစ်စဂါ လူမျိုး ၂,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ မြောက်ပိုင်း နက်စ်မြစ်ဝှမ်းရှိ ၎င်းတို့၏ ကျေးရွာကို ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုမှ ၁၄မိုင် (၂၂.၅ ကီလိုမီတာ) တိုင်အောင် ချော်ရည်များ စီးထွက်ခဲ့ပြီး နစ်စဂါလူမျိုးတို့၏ ပါးစပ်ရာဇဝင် အရ နက်စ်မြစ်၏ စီးဆင်းမှုကိုပင် ပိတ်ဆို့စေခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုမှာ ၁ စတုရန်းမိုင်လျှင် ၈.၅ ဦး (၁ စတုရန်း ကီလိုမီတာလျှင် ၃.၃ ဦး) မျှ ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများတွင် ပါဝင်သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၏ လူဦးရေ အသိပ်သည်းဆုံးသော ဒေသမှာ ကွီးဗက်စီးတီး- ဝင်ဆာစင်္ကြန် ဒေသ ဖြစ်ပြီး ကွီးဗက်တောင်ပိုင်းနှင့် အွန်တေရီအို တောင်ပိုင်း ဂရိတ်လိတ် ရေကန် ကြီးများ နှင့် စိန့်လောရင့်စ် မြစ် တလျှောက်တွင် တည်ရှိသည်။
နွေရာသီ နှင့် ဆောင်းရာသီတို့၏ ပျမ်းမျှ အမြင့်ဆုံး အပူချိန် များမှာ ကနေဒါနိုင်ငံ တလျှောက် ဒေသအလိုက် ကွဲပြားသည်။ ဆောင်းရာသီမှာ နိုင်ငံ၏ နေရာ အတော်များများတွင် ကြမ်းတမ်းပြီး အထူးသဖြင့် ကုန်းတွင်းပိုင်း နှင့် ပရေရီမြက်ခင်းရှိရာ ပြည်နယ်များတွင် ဖြစ်ကာ ထိုဒေသများတွင် ကုန်းတွင်း ရာသီဥတု ရှိပြီး နေ့စဉ် ပျမ်းမျှ အပူချိန်မှာ အနှုတ် ၁၅ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယမ် ( ၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) မျှ ဖြစ်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော လေတိုက်ခတ်မှုများ ရှိလျှင် အနှုတ် ၄၀ ဒီဂရီ အထိ ကျဆင်းလေ့ ရှိသည်။ ကမ်းရိုးတန်း မဟုတ်သော ဒေသများတွင် နှင်းဖုံးလွှမ်းနေသည့် အချိန်မှာ ၁ နှစ်လျှင် ၆ လ ခန့် အထိ ရှိနိုင်ပြီး အချို့သော မြောက်ဘက်ဒေသ နှင်းများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖုံးလွှမ်းနေတတ်သည်။ ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွင် သမပိုင်း ရာသီဥတု ရှိပြီး မပြင်းထန်ပဲ မိုးရွာသော ဆောင်းရာသီ ရှိတတ်သည်။ အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းနှင့် အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းများတွင် ပျမ်းမျှ အမြင့်ဆုံး အပူချိန်မှာ ယေဘူယျအားဖြင့် ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ် (၇၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) မျှ ရှိပြီး ကမ်းရိုးတန်းများ ကြားတွင် ပျမ်းမျှ နွေရာသီ အမြင့်ဆုံး အပူချိန်မှာ ၂၅ မှ ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ် (၇၇ မှ ၈၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) အထိ ရှိကာ အချို့သော ကုန်းတွင်းပိုင်း ဒေသများတွင် အပူချိန်မှာ ရံဖန်ရံခါတွင် ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ် (၁၀၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) မျှ အထိ ရှိတတ်သည်။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အစိုးရ
ကနေဒါ၏ မြို့တော်ဖြစ်သော အော့တဝမြို့ရှိ ပါလီမန် အဆောက်အအုံ တောင်ကုန်း
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ် နှင့် ဆက်စပ်နေသော ပါလီမန်စနစ် ကျင့်သုံးသည်။ ကနေဒါ၏ ဘုရင်စနစ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး နှင့် ဥပဒေပြုရေး ကဏ္ဍများ၏ အခြေခံ ဖြစ်သည်။နိုင်ငံ၏ ဦးသျှောင်မှာ ဒုတိယမြောက် အဲလိဇဘက် ဘုရင်မ ဖြစ်၍ သူမသည် အခြားသော ဓနသဟာယနိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံနှင့် ကနေဒါ ပြည်နယ် ၁၀ခု ၏ အကြီးအကဲလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဘုရင်မ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော ကနေဒါ ဘုရင်ခံချုပ် (လက်ရှိတွင် ဒေးဗစ် လွိုက် ဂျွန်စတန်) က ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ တော်ဝင် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်သည်။
ဘုရင်မနှင့် ဘုရင်ခံချုပ်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်မှုမှာ အလွန်နည်းပါးသည်။ တကယ်တမ်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာကို အောက်လွှတ်တော်မှ တာဝန်ခံရပြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ အကြီးဆုံး ဖြစ်သော ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်မှ ရွေးချယ် ဦးဆောင်သော အစိုးရ သို့မဟုတ် ဘုရင်မ၏ ဝန်ကြီးများမှ ညွှန်ကြား ကွပ်ကဲသည်။ လက်ရှိ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်မှာ စတီဖင် ဟာပါး ဖြစ်သည်။ အချို့သော အရေးပေါ် အခြေအနေများတွင် ဘုရင်ခံချုပ် သို့မဟုတ် ဘုရင်မသည် ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏ အကြံပေးမှု မပါဘဲ ၎င်းတို့၏ အာဏာကို အသုံးချခွင့် ရှိသည်။ အစိုးရ အဖွဲ့တွင် တည်ငြိမ်မှု ရှိစေရန် အတွက် အောက်လွှတ်တော်တွင် အများ၏ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရပြီး လက်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူကို ဘုရင်ခံချုပ်က ဝန်ကြီးချုပ် အဖြစ် ခန့်အပ်လေ့ ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း အာဏာ အရှိဆုံး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဥပဒေ အများစုကို ပါလီမန်၏ ထောက်ခံမှု ရယူရန် စတင် အဆိုပြုလေ့ ရှိပြီး ဘုရင်ခံချုပ်များ၊ ပြည်နယ် ဘုရင်ခံများ၊ ဆီးနိတ်အမတ်များ၊ ဖက်ဒရယ် တရားရုံး၏ တရားသူကြီးများ၊ ဘုရင်မပိုင် စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၏ အကြီးအကဲများ၊ အစိုးရ အေဂျင်စီများကို ဘုရင်မမှ ခန့်ထားနိုင်ရန် အတွက် ရွေးချယ် ပေးရသည်။ ဒုတိယမြောက် အမတ်အများဆုံး ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်မှာ ဘုရင်မ၏သစ္စာခံ အတိုက်အခံ၏ ခေါင်းဆောင် (လက်ရှိတွင် သောမတ်စ် မူလ်ကဲယား) ဖြစ်ပြီး အစိုးရကို အမြဲတစေ စစ်ဆေးနေရန် ရည်ရွယ်သည့် အပြိုင်အဆိုင် ပါလီမန် စနစ်၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။
ပါလီမန် တောင်ကုန်း၏ ဗဟို အဆောက်အဦးအတွင်း တည်ရှိသော ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ခန်းမ
အောက်လွှတ်တော် အမတ် ၃၀၈ ဦးအား မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုချင်းစီတွင် မဲအများဆုံးလူကို ရွေးချယ်သည်။ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘုရင်ခံချုပ်မှ ကျင်းပရန် ကြေငြာပြီး ယခင် ရွေးကောက်ပွဲမှ ၄ နှစ် အတွင်း ဝန်ကြီးချုပ်၏ အကြံပေးချက်ကို ရယူ၍ သော်လည်းကောင်း၊ အောက်လွှတ်တော်တွင် အစိုးရအား အယုံအကြည်မရှိ မဲပေးခြင်း ခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပသည်။ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်၏ အမတ် ၁၀၅ ဦးကို ဒေသအလိုက် ခွဲတမ်းကျ ခန့်အပ်ပြီး အသက် ၇၅ နှစ် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖက်ဒရယ် ပါလီမန်သို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသည်။ ၎င်းတို့မှာ အာဏာရ ပါတီဖြစ်သော ကွန်ဆာဗေးတစ် ပါတီ၊ တရားဝင် အတိုက်အခံ ပါတီ ဖြစ်သော နယူး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၊ ကနေဒါ လစ်ဘရယ် ပါတီ၊ ကီဗက်ကွာ အဖွဲ့ နှင့် ကနေဒါ ဂရင်းပါတီ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ပါလီမန်သို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း ခံရသော သမိုင်းရှိသည့် ပါတီများ အများအပြားပင် ရှိသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် အစိုးရ၏ တာဝန်ကို ဖက်ဒရယ် အစိုးရနှင့် ပြည်နယ် ၁၀ ခု တို့အကြား ခွဲဝေထားသည်။ ပြည်နယ် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်တစ်ရပ်စီသာ ရှိပြီး အောက်လွှတ်တော်နှင့် လုပ်ကိုင်ပုံခြင်း တူညီသည်။ ကနေဒါ၏ ဒေသ ၃ ခုတွင်လည်း ဥပဒေပြု လွှတ်တော်များ ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် အချုပ်အခြာ အာဏာ မရှိပဲ ပြည်နယ်များနှင့် ယှဉ်လျှင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှ ပေးအပ်ထားသော တာဝန် နည်းပါးသည်။ဒေသဆိုင်ရာ လွှတ်တော်များမှာလည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်များနှင့် ပုံစံချင်း ကွဲပြားသည်။
ကနေဒါဘဏ်သညည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဗဟိုဘဏ် ဖြစ်သည်။  ထို့ပြင် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးတို့မှ ကနေဒါ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ ကို အသုံးပြု၍ ဘဏ္ဍာရေး အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး ပေါ်လစီ များ ရေးဆွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ဥပဒေဖြစ်ပြီး ​ရေးသားပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေနှင့် ရေးသား မထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပါဝင်သည်။ ၁၈၆၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အက် (၁၉၈၂ ခုနှစ် မတိုင်မီက ဗြိတိသျှ မြောက်အမေရိက အက်ဥပဒေဟု သိရှိကြသည်။) မှ ပါလီမန် အစဉ်အလာတွင် အခြေခံသော အစိုးရ နှင့် ဖက်ဒရယ်အစိုးရ နှင့် ပြည်နယ် အစိုးရများ အကြား အာဏာ ခွဲဝေထားခြင်းကို အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်း ပေးထားသည်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ် ဝက်မင်စတာ စတက်ကျု အက်ဥပဒေမှ အပြည့်အအဝ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အက်ဥပဒေ အရ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းနှင့် ဥပဒေပြုရေး ဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှု အားလုံးကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည့် အပြင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်မည့် နည်းလမ်း အပြင် အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုဆိုင်ရာ ကနေဒါ ချာတာကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုချာတာမှ မည်သည့် အစိုးရ ကမှ မပယ်ဖျက်နိုင်သည့် အခြေခံ အခွင့်အရေး နှင့် လွတ်လပ်မှုတို့ကို အာမခံ ပေးထားခဲ့သည်။ သို့သော် ဖက်ဒရယ် ပါလီမန် နှင့် ပြည်နယ် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်တို့အား ချာတာ၏ အချို့ အစိတ်အပိုင်းများကို ၅ နှစ်သက်တမ်းဖြင့် ခေတ္တမျှ ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့် ပေးထားသည်။
၁၈၇၁–၁၉၂၁ အတွင်း နံပါတ်စဉ် သဘောတူညီမှု စာချုပ်များ အတွက် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ဝေထားသည့် အင်ဒီးယန်းခေါင်းဆောင် ဒင်္ဂါးပြား
ဥရောပသားများ နှင့် ဒေသခံများ အကြား ဆက်ဆံရေးကို ပြေလည်စေရန် အတွက် အင်ဒီးယန်း အက်ဥပဒေဟု ခေါ်သည့် သဘောတူညီချက် အများအပြား နှင့် အမှုအခင်း ဥပဒေများ ရှိသည်။ ၎င်းတို့အထဲတွင် အထင်ရှားဆုံးမှာ နံပါတ်စဉ် သဘောတူညီမှု စာချုပ်များဟု ခေါ်ဆိုသည့် ၁၈၇၁မှ ၁၉၂၁ အတွင်း ရှေးဦးနေထိုင်သူများနှင့် ကနေဒါ ဘုရင် တို့အကြား ချုပ်ဆိုခဲ့သည့် သဘောတူ စာချုပ် ၁၁ ခု ဖြစ်သည်။ ထို သဘောတူစာချုပ်များမှာ ကနေဒါ ကွင်းကောင်စီ နှင့် သဘောတူညီချက်များ ဖြစ်ပြီး ကနေဒါ ရှေးဦးနေထိုင်သူများ ဥပဒေဖြင့် စီမံခန့်ခွဲပြီး ရှေးဦးနေထိုင်သူများ အရေးနှင့် မြောက်ပိုင်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးမှ ကြီးကြပ်သည်။ ထို သဘောတူ စာချုပ်များ၏အခန်းကဏ္ဍ နှင့် ၎င်းတို့မှ ပံ့ပိုးပေးထားသော အခွင့်အရေးများကို ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အက်ဥပဒေ အခန်း ၃၅ မှ ထပ်မံ အတည်ပြု ပေးထားသည်။ ထိုအခွင့်အရေးများတွင် ကျန်းမာရေး အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း နှင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ကနေဒါ နှင့် ရှေးဦးနေထိုင်သူ ဖတ်စ်နေးရှင်း လူမျိုးတို့အကြားရှိ ဥပဒေ နှင့် ပေါ်လစီ ဘောင်များကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဖတ်စ်နေးရှင်းနှင့်ဘုရင်တို့အကြား နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထပ်မံ၍ တရားဝင်စေခဲ့သည်။
ပါလီမန်တောင်ကုန်း၏ အနောက်ဘက်ရှိ ကနေဒါ တရားလွှတ်တော်ချုပ်
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ တရားရုံးများမှာ တရားဥပဒေကို ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်သော ပါလီမန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပယ်ဖျက်ခွင့် ရှိသည်။ ကနေဒါ တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် အမြင့်ဆုံး တရားရုံး နှင့် အဆုံးသတ် ဆုံးဖြတ်ပေးသူ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှစ၍ ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး တရားသူကြီးချုပ် ဘာဗလီ မက်လက်လင်း မှ ခေါင်းဆောင်လျှက် ရှိသည်။ ထို တရားရုံးရှိ တရားသူကြီး ကိုးဦးကို ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် တရားရေး ဝန်ကြီးတို့၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် ဘုရင်ခံချုပ်မှ ခန့်အပ်သည်။ ပြည်နယ်/ဒေသ အဆင့် တရားရုံး နှင့် အယူခံ တရားရုံးများ၏ တရားသူကြီးများကို အစိုးရမဟုတ်သော တရားရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် တိုင်ပင်ခန့်အပ်သည်။ ဖက်ဒရယ် အစိုးရမှလည်း ပြည်နယ် နှင့် ဒေသ အဆင့် တရားရုံးများအတွက် တရားသူကြီးများကို ခန့်အပ်လေ့ ရှိသည်။
ထုံးတမ်းဥပဒေများမှာ တရားမ ဥပဒေကျင့်သုံးသော ကွီးဗက်မှ လွဲ၍ နေရာ အနှံ့အပြားတွင် ကျင့်သုံးကြသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများမှာမူ ဖက်ဒရယ် အဆင့်မှ တာဝန်ယူပြီး နိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် အညီအမျှ ကျင့်သုံးသည်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့် ရာဇဝတ်တရားရုံး များကို ပြည်နယ်အဆင့်မှ တာဝန်ယူပြီး ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့် စည်ပင်ရဲတပ်ဖွဲ့များက စီမံခန့်ခွဲသည်။ သို့သော်လည်း ကျေးလက်ဒေသ နေရာ အများအပြားနှင့် အချို့သော မြို့ပြ ဧရိယာများတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဖက်ဒရယ် တော်ဝင်ကနေဒါ မြင်းစီး ရဲတပ်ဖွဲ့များသို့ ကန်ထရိုက် ပေးထားတတ်သည်။
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနှင့် စစ်ရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ ရက် ၃၆ ကြိမ်မြောက် ဂျီအိတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဒေးဗစ် ကင်မရွန် ၊ စတီဖင်ဟာပါး (ရှေ့) တို့ကို ဟာမန်းဗန် ရွန်ပိုင်း၊ ဒီမီထရီ မက်ဒ်ဗက်ဒဗ် နှင့် နာအိုတို ကန် တို့နှင့် အတူ တွေ့ရစဉ်
ကနေဒါရှိ ကြေးစားနှင့် အပျော်တမ်း တပ်ဖွဲ့များ၏ အင်အားမှာ အမြဲတမ်း စစ်သား ၆၈,၂၅၀ ဦး နှင့် အရန်စစ်သား ၅၁,၀၀၀ ဦးမျှ ရှိသည်။ စုစည်းထားသော ကနေဒါ တပ်မတော်တွင် ကနေဒါ ကြည်းတပ်၊ တော်ဝင် ကနေဒါ ရေတပ် နှင့် တော်ဝင် ကနေဒါ လေတပ်တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စစ်သုံးစရိတ်မှာ ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၁၉ ဘီလီယံ သို့ မဟုတ် နိုင်ငံ ဂျီဒီပီ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့ ကြားတွင် အရှည်လျားဆုံး အစောင့်အကြပ် မရှိသော နယ်စပ် ရှိပြီး စစ်ရေး တိုက်ခိုက်မှုနှင် လေ့ကျင့်မှုများတွင် ပူးပေါင်းလေ့ ရှိပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အကြီးမားဆုံးသော ကုန်သွယ်ဖက်များ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ကနေဒါတွင် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒရှိပြီး ကျူးဘားနိုင်ငံနှင့် ၁၉၆၁ မှ ၂၀၁၄ အထိ ဆက်ဆံရေး အပြည့်အဝ ရှိကာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အီရတ်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းတွင် ပါဝင်ရန် တရားဝင် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကနေဒါသည် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ တို့နှင့် သမိုင်းကြောင်းကို အခြေခံသော ဆက်နွယ်မှု ရှိပြီး အခြားသော ဗြိတိသျှ နှင့် ပြင်သစ်ကိုလိုနီများ နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အဖွဲ့နှင့် ဖရန်ကိုဖိုနီ အဖွဲ့တို့တွင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကနေဒါသည် နယ်သာလန် နိုင်ငံနှင့် အပေါင်းလက္ခဏာ ဆန်သော ဆက်ဆံရေး ရှိပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဒတ်ချ်တို့၏ လွတ်မြောက်မှု အတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည့် အကြောင်းကလည်း ထိုဆက်ဆံရေး၏ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်သည်။
ကနေဒါသည် ဗြိတိသျှ အင်ပါယာနှင့် ဓနသဟာယနိုင်ငံများ နှင့် ခိုင်မြဲစွာ တွဲဖက်နေမှုများကြောင့် ဗြိတိသျှ စစ်တပ်၏ စစ်ရေးတိုက်ပွဲများ ဖြစ်သော ဒုတိယ ဘိုအာစစ်ပွဲ၊ ပထမကမ္ဘာစစ် နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တို့တွင် အဓိက နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတကာနှင့် ပူးပေါင်း၍ ပြဿနာဖြေရှင်းမှုများတွင် ထောက်ခံအားပေးသူ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ရေးရာ ပြဿနာများကို အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်း ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ကနေဒါသည် ၁၉၄၅ တွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂ္ဂ နှင့် ၁၉၄၉ တွင် နေတိုးအဖွဲ့ တို့ကို စတင်တည်ထောင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်အေးတိုက်ပွဲ ကာလ အတွင်းတွင် ကနေဒါသည် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ အတွင်း ကုလသမ္မဂ္ဂတပ်ဖွဲ့များသို့ အဓိက ပံ့ပိုးသူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှ ပြုလုပ်လာနိုင်သော တိုက်ခိုက်မှုများကကို ကာကွယ်ရန် အတွက် မြောက်အမေရိက လေကြောင်း ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့ (NORAD) ကို ပူးပေါင်း တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ် ယူနီတက်စ် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင် တော်ဝင် ရယ်ဂျီမင့် ၂၂ မှ ကနေဒါကြည်းတပ်စစ်သားများ နေရာယူထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်။
၁၉၅၆ ခုနှစ် ဆူးအက်တူးမြောင်း ပြဿနာတွင် နောင်ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာမည့် လက်စတာ ဘီ ပီယာဆန်က ကုလသမ္မဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များကို စတင်ဖွဲ့စည်းရန် အကြံပေးခြင်း အားဖြင့် တင်းမာမှုများကို လျော့ကျစေပြီး ထိုသို့ အားထုတ်မှု အတွက် သူ့အား ၁၉၅၇ ခုနှစ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆု ကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။. ထိုအချိန်မှာ ကုလသမ္မဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ ပထမဆုံး လုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သဖြင့် ပီယာဆန်သည် ထိုအကြံကို အစပြုသူ အဖြစ် အမြဲ အသိအမှတ်ပြု ခံရလေ့ ရှိသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကုလသမ္မဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းစဉ် များတွင် အကြိမ် ၅၀ ကျော် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်အထိ ကုလသမ္မဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းစဉ် အားလုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကာ  နောက်ပိုင်းတွင် ရဝမ်ဒါ နိုင်ငံ၊ ယခင် ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ နှင့် အခြားနေရာများရှိ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တခါတရံတွင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်မှုများကြောင့် အငြင်းပွားစရာ ပြဿနာများ ကြုံရလေ့ ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဆိုမာလီနိုင်ငံ အရေးအခင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု တွင် ဖြစ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံများ အဖွဲ့ (OAS) သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အွန်တေရီအိုဒေသ ဝင်ဆာမြို့၌ အထွေထွေ ညီလာခံကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့ကာ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဧပြီလ၌ ကွီးဗက်စီးတီးတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံများ၏ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံကျင်းပ ခဲ့သည်။ ကနေဒါသည် ပစိဖိတ်ကမ်းခြေ နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရန် အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ ဖိုရမ် (APEC) သို့ အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ရင်းပက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အတွင်း တွေ့ရသော တော်ဝင် ကနေဒါရေတပ်၏ ဟယ်လီကော်ပတာ ဆင်းသက်နိုင်သော စစ်သင်္ဘော အိတ်ချ်အမ်စီအက်စ် ရယ်ဂျီးနား၏ ပုံ
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါသည် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံသို့ အမေရိကန် ထိန်းကွပ်ရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကုလသမ္မဂ္ဂမှ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသော နေတိုးမှ ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး ပံ့ပိုးမှု တပ်ဖွဲ့ ၏ အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် လည်းကောင်း တပ်များ ပို့လွှတ်ခဲ့သည်။ ၁၀ နှစ်တာ စစ်ဆင်ရေး ကာလ အတွင်း ကနေဒါမှ စုစုပေါင်း စစ်သား ၁၅၈ ဦး၊ သံတမန် တစ်ဦး၊ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး သမား ၂ ဦး နှင့် သတင်းထောင် တစ်ဦးတို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး  ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၁၁.၃ ဘီယံ မျှ ကုန်ကျခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကနေဒါ၊ အီတလီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ နော်ဝေ နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့မှ ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ကုန်ကျမည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ အတွက် ကာကွယ်ဆေးများ ဖော်ထုတ်ရန် ပရော့ဂျက်၌ ပူးပေါင်း ပံ့ပိုးမည်ဟု ကြေငြာခဲ့ကြပြီး အခြားနိုင်ငံများကိုလည်း ၎င်းတို့နှင့် အတူ ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ရုရှားတို့၏ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသအတွင်း ရေအောက် စူးစမ်း ရှာဖွေမှုက အာတိတ်ဒေသအတွင်း ကနေဒါ၏ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ထားမှုကို စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ကနေဒါသည် ထိုဒေသအား ၎င်းတို့၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် ဒေသအဖြစ် ၁၉၂၅ ခုနှစ်ကတည်းက သတ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှ အောက်တိုဘာလ အတွင်းတွင် ကနေဒါတပ်ဖွဲ့များသည် ကုလသမ္မဂ္ဂမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ချက်အရ လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ် အတွင်း ပါဝင် ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ကနေဒါ မြေပြင်နှင့် ဝေဟင်တပ်တို့သည်အီရတ်နိုင်ငံ အတွင်း အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ ၏ ထကြွမှုကို နှိမ်နှင်းရာတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များနှင့် အတူ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကနေဒါသည် နိုင်ငံတကာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းမှုများတွင် ပါဝင်နေမှုတို့အတွက် အင်အား အလယ်အလတ်ရှိ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသည်။ ကုလသမ္မဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂျီ၂၀ နှင့် စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ တို့တွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်နေရုံမျှသာမက ကနေဒါနိုင်ငံသည် အခြားသော စီးပွားရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖိုရမ်များတွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်လျှက် ရှိသည်။ ကနေဒါသည် ၁၉၇၆တွင် အများပြည်သူ့ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ပဋိဉာဏ်စာချုပ်အား လက်ခံသဘောတူ ခဲ့သည်။
ပြည်နယ် နှင့် ဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကနေဒါနိုင်ငံသည် ပြည်နယ် ၁၀ခု ဒေသ ၃ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ထိုပြည်နယ်များကို အဓိက ဒေသကြီး ၄ ခု အဖြစ် ပြန်လည် စုဖွဲ့ရှုမြင်နိုင်သည်။ အနောက် ကနေဒါ၊ အလယ်ကနေဒါ၊ အတ္တလန္တိတ် ကနေဒါ နှင့် မြောက်ကနေဒါ တို့ ဖြစ်သည်။ (အရှေ့ကနေဒါ ဆိုသည်မှာ အလယ်ကနေဒါ နှင့် အတ္တလန္တိတ် ကနေဒါတို့ကို ပေါင်းစပ် ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်များသည် ဒေသများထက်ပို၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပိုရှိကြပြီး လူမှုရေး အစီအစဉ်များ ဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေး နှင့် လူမှုဖူလုံရေး တို့တွင် ပို၍ တာဝန်ယူရသည်။ အားလုံးပေါင်းပါက ပြည်နယ်များသည် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ ထက် အမြတ်ခွန်ပိုရပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင် ထူးခြားသော ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ် အစိုးရသည် ၎င်းတို့၏ သုံးစွဲနိုင်စွမ်းပေါ် မူတည်၍ ကနေဒါ ကျန်းမာရေး အက်ဥပဒေ အစရှိသော နိုင်ငံတဝှမ်း ပေါ်လစီများကို အစပျိုးလေ့ရှိပြီး ပြည်နယ်များမှ မလုပ်ချင်ပါက မလုပ်နိုင်သော်လည်း ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ ရှားသည်။ ချမ်းသာသော ပြည်နယ်များ နှင့် ဆင်းရဲသော ပြည်နယ်များကြား ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခွန်အခ ကောက်ခံမှုကို ညီတူညီမျှ ဖြစ်စေရန် အစိုးရမှ ညီမျှခြေ ပံ့ပိုးငွေများကို ပြည်နယ်များသို့ ပေးအပ်လေ့ ရှိသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် အထိ ကနေဒါနှင့် လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက် ရှိသော နိုင်ငံများကို အပြာရင့်ရောင် ဖြင့် ပြထားပြီး၊ ညှိနှိုင်းဆဲ နိုင်ငံများကို အပြာနုရောင်ဖြင့် ပြထားသည်။ အစိမ်းရောင်မှာ ကနေဒါနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၁ ခုမြောက် အကြီးဆုံးသော စီးပွားရေး ရှိသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အမည်ခံ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် မှာ ခန့်မှန်းခြေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၇၉ ထရီလီယံ မျှ ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ (အိုအီးစီဒီ) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရှစ်နိုင်ငံ အဖွဲ့ (ဂျီအိတ်) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကုန်သွယ်မှု အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံတွင် ပါဝင်ပြီး တကမ္ဘာလုံးနှင့် မြင့်မားစွာ ဆက်စပ်နေသော စီးပွားရေး ရှိသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် ရောပြွမ်းစီးပွားရေး ရှိသောနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ဟယ်ရီတေ့ချ် ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေး လုပ်ရန် လွတ်လပ်မှု အရှိဆုံး နိုင်ငံများတွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နှင့် အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများ၏ အထက်တွင် ရှိသည်။ ဝင်ငွေကွာဟမှု လည်း အလွန်နည်းသည်။  နိုင်ငံရှိ သာမန် အိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်ဦးချင်း သုံးစွဲနိုင်သော ဝင်ငွေ၏ ပျမ်းမျှခြင်းမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၃,၉၀၀ ရှိသဖြင့် အိုအီးစီဒီ နိုင်ငံများ၏ ပျမ်းမျှ ထက် မြင့်မားသည်။ ထို့ပြင် တိုရွန်တို စတော့အိတ်ချိန်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးကွက် အရင်းပြုခြင်းအားဖြင့် သတ္တမမြောက် အကြီးဆုံး စတော့အိတ်ချိန်း ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ကုမ္ပဏီ ၁,၅၀၀ ကျော်၏ စတော့ခ်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ပြုနေကြကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စုပေါင်း အရင်းအနှီးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ ထရီလီယံ ကျော်မျှ ရှိသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ပြည်ပပို့ကုန်မှာ ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၅၂၈ ဘီလီယံမျှ ဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်များမှာ ၅၂၃ ဘီလီယံမျှ ရှိကာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှ ၃၄၉ ဘီလီယံ၊ ဥရောပ သမ္မဂ္ဂမှ ၄၉ ဘီလီယံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ၃၅ ဘီလီယံတို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ခြားနားချက်မှာ ၅.၁ ဘီလီယံ အပိုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ၄၆.၉ ဘီလီယံ အပိုမျှ ရရှိခဲ့သည်။
၂၀ ရာစု အစောပိုင်းမှ စ၍ ကနေဒါ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ သတ္တုလုပ်ငန်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု များကြောင့် နိုင်ငံအား ကျေးလက်အခြေခံ စီးပွားရေး စနစ်မှ မြို့ပြအခြေခံ ကုန်ထုတ်လုပ်ရာ စီးပွားရေး စနစ် အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများ နည်းတူပင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတွင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းသည် အဓိက ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်သမား ၄ ပုံ ၃ ပုံသည် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများနှင့် ကနေဒါတို့၏ ကွဲပြားခြားနားချက်မှာ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အခြေခံစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွင် သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ရေနံလုပ်ငန်းတို့သည် ထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်း အဖြစ် ပါဝင်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကနေဒါသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများထဲမှ စွမ်းအင်ကို တင်ပို့ရောင်းချမှု တင်သွင်းမှုထက်များသော နိုင်ငံ အနည်းငယ်တွင် ပါဝင်သည်။ အတ္တလန္တိတ် ကနေဒါ အပိုင်းတွင် ကမ်းလွန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ မြောက်များစွာ ရှိပြီး အယ်လ်ဘာတာတွင်လည်း ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရင်းအမြစ် အမြောက်အများ ရှိသည်။ အာသာဘာစကာ ရေနံမြေ၏ ကျယ်ပြန့်မှုနှင့် အခြား ရေနံထွက်ရှိရာ ဒေသများကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမျှသော ရေနံ ရှိရာ နေရာ ဖြစ်ပြီး ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံနှင့် ဆော်ဒီအာရေဗျ နိုင်ငံတို့ ပြီးလျှင် တတိယမြောက် အများဆုံး ရေနံထွက်ရှိရာ ဒေသဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကနေဒါနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်ကုန် အများဆုံး ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ကနေဒါ ပရေရီမြက်ခင်းပြင်ဒေသသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံး အတွက် အရေးပါသော ဂျုံ၊ ကနိုလာ နှင့် အခြားနှံထွက် ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရာ ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာနမှ အဓိက ပို့ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သော စာရင်းဇယားကို ဖော်ပြရာတွင် ကနေဒါသည် ဇင့်၊ ယူရေနီယမ်၊ ရွှေ၊ နစ်ကယ်၊ အလူမီနီယမ်၊ စတီးလ်၊ သံရိုင်း၊ ကုတ် မီးသွေး နှင့် ခဲ တို့ကို တင်ပို့ရာတွင် ထိပ်တန်းမှ ပါဝင်သည်။ ကနေဒါမြောက်ပိုင်းရှိ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ပြုလုပ်ရန် ခဲယဉ်းသော ဒေသများတွင် အနီးအနားတွင် သတ္တုတွင်းများနှင့် သစ်ထုတ်လုပ်ရာ နေရာများ ရှိသောကြောင့် အသက်ရှင် ရပ်တည်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ အွန်တေရီယို တောင်ပိုင်းနှင့် ကွီးဗက်တို့တွင် အတော်အတန် ကြီးမားသော ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း ရှိပြီး လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ နှင့် မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများမှာ အရေးပါသော ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍများ ဖြစ်သည်။
မြောက်အမေရိက လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်(NAFTA) လိုဂို
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ ကနေဒါသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုများပြား လာသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ် မော်တော်ကားဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်း ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်မှ ကနေဒါနိုင်ငံ၏နယ်စပ်ကို မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် လမ်းပွင့် သွားစေခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များ အတွင်း စွမ်းအင် မိမိနိုင်ငံအတွက် ဖူလုံရေး နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြားသားများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ် ပီးယဲ ထရူးဒိုး၏ လစ်ဘရယ်အစိုးရအား အမျိုးသားစွမ်းအင် အစီအစဉ် နှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သုံးသပ်ရေး အေဂျင်စီ (ဖီရာ)တို့ကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ဘရိုင်ယန် မူလ်ရွန်နီ၏ တိုးတက်သော ကွန်ဆာဗေးတစ် အစိုးရက အမျိုးသား စွမ်းအင် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများကို အားပေးရန် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အေဂျင်စီ အား ကနေဒါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့ဟု အမည် ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ကနေဒါ-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက် အရ နှစ်နိုင်ငံအကြား သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ အခွန်ကောက်ခံမှုများကို ပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ ခုနှစ် မြောက်အမေရိက လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် (NAFTA) အရ လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်မှု ရှိသည့်ဒေသတွင် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ပါ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် များ၏ အလယ်ပိုင်းတွင် ယန်း ခရေတီယန်၏ လစ်ဘရယ် အစိုးရမှ နှစ်စဉ် ဘတ်ဂျက် ပိုငွေ ပြမှုများကို ပြသနိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကြွေးမြီများကို ဖြည်ဖြည်းချင်း ပြန်၍ ဆပ်နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ကြီးမားသော စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ သိသာစွာ များပြားလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၈.၆ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှ မနီတိုဘာတွင် အနည်းဆုံး ၅.၈ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် နယူးဖောင်လန်၊ လာဘရာဒေါ စသည်တို့တွင် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကြားတွင် ကနေဒါ အလုပ်သမား ဈေးကွက်တွင် အချိန်ပြည့် အလုပ်အကိုင် ပေါင်း ၁၆၂,၀၀၀ နှင့် အမြဲတမ်း အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၂၂၄,၀၀၀ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ ကြွေးမြီမှာ ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာရေး နှစ် အတွက် ဒေါ်လာ ၅၅၆.၇ ဘီလီယံမျှ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈-၀၉ ခုနှစ် ကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၄၆၃.၇ ဘီလီယံမှ မြင့်တက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ပထမ ၃ လပတ်တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြား ကြွေးမြီမှာ ဒေါ်လာ ၄၁ ဘီလီယံမှ ၁၉၄ ဘီလီယံသို့ တိုးမြင့် လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း စည်းကမ်းတင်းကျပ်သော ကနေဒါ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍ (ဂျီအိတ် နိုင်ငံများကြားတွင် ရှေးရိုးဆန်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်)၊ ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ စီးပွားပျက်ကပ် မတိုင်မီ ဘတ်ဂျက် ပိုငွေ ပြမှု နှင့် နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကြွေးမြီများကို လျှော့ချရန် ရေရှည် အစီအမံ တို့ကြောင့် အခြား ဂျီအိတ် နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သိပ်မပြင်းထန်သော စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါ၏ စီးပွားရေးမှာ များစွာ တည်ငြိမ်လာခဲ့ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့ အသင့်အတင့် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော် မတည်ငြိမ်သော ရေနံဈေး၊ ယူရိုဇုန် စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှု နှင့် ပုံမှန်ထက်ပိုသော အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတို့ကြော့် နိုင်ငံမှာ အခက်အခဲများ ရင်ဆိုင်နေရဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ် အစိုးရ နှင့် ကနေဒါမှ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း အများအပြားမှာ စတင်တိုးတက်လာသော အာရှဈေးကွက်နှင့် ကုန်သွယ်မှုများ တိုးမြှင့်လာခဲ့ပြီး ပို့ကုန်တင်ပို့မှု ဈေးကွက်ကို ချဲ့ထွင်လာခဲ့သည်။ ယခုအခါ အာရှဈေးကွက်သည် ကနေဒါနိုင်ငံအတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံးသော ပို့ကုန် ဈေးကွက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငြင်းခုံ ဆွေးနွေးမှု အများအပြား ရှိနေသော ရေနံပိုက်လိုင်း အဆိုပြုမှုသည် ကနေဒါ၏ ရေနံထွက်ကုန်များအား တရုတ် သို့ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရန် မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် STS-116 မစ်ရှင် အတွင်း ဒစ်စကာဗာရီ အာကာသ လွန်းပျံယဉ် ပေါ်တွင် တွေ့ရသော ကနေဒါ စက်ရုပ် ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ကနေဒါမ်
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါသည် ပြည်တွင်း သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း တို့အတွက် ကနေဒါ ဒေါ်လာ ၃၁.၃ ဘီလီယံမျှ သုံးစွဲခဲ့ပြီး ၇ ဘီလီယံမှာ ဖက်ဒရယ် အစိုးရ နှင့် ပြည်နယ် အစိုးရတို့မှ ပံ့ပိုးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထိ ကနေဒါနိုင်ငံမှ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ နှင့် ဆေးပညာတို့အတွက် နိုဘယ်ဆုရှင်ပေါင်း ၁၃ ယောက်မျှ မွေးထုတ် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အဓိက စစ်တမ်းတစ်ခု အရ သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသန အရည်အသွေးတွင် တကမ္ဘာလုံး စတုတ္တ အဆင့် အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ အများအပြား၏ ရုံးချုပ် တည်ရှိရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ကနေဒါသည် တကမ္ဘာလုံးတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ ရာခိုင်နှုန်း အများဆုံး ရှိသောနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူ ၃၃ သန်းမျှ ရှိကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေ ၏ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်းမျှ ရှိသည်။
ကနေဒါ အာကာသ အေဂျင်စီမှာ အလွန်တက်ကြွသော အာကာသ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပြီး နက်ရှိုင်းသော အာကာသအတွင်းပိုင်း သုတေသန၊ ဂြိုဟ်များဆိုင်ရာ သုတေသန နှင့် လေကြောင်းသွားလာရေး ဆိုင်ရာ သုတေသန များကို ပြုလုပ်လျှက် ရှိကာ ရော့ကက်များ နှင့် ဂြိုဟ်တုများကို တီထွင် ထုတ်လုပ်လျှက် ရှိသည်။ ကနေဒါသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် အာလွက် ၁ ဂြိုဟ်တု လွှတ်ထုတ်မှုကြောင့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့ပြီးလျှင် တတိယမြောက် ဂြိုဟ်တု ထုတ်လွှတ်နိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် မာ့ခ် ဂါနိုးသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အာကာသ အတွင်း သွားလာသူ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထိ လူလိုက်ပါသော အာကာသ အစီအစဉ် ၁၇ ခုနတွင် ကနေဒါနိုင်ငံသား ကိုးဦး အာကာသ အတွင်း ခရီးသွားလာခဲ့သည်။
ကနေဒါသည် နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်း တွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အာကာသဆိုင်ရာ စက်ရုပ်နည်းပညာတွင် ရှေးဦးစတင်သူ လည်း ဖြစ်ကာ ကနေဒါမ်၊ ကနေဒါမ် ၂ နှင့် ဒက်စထရီ စက်ရုပ် ကိုင်တွယ် ထိန်းချုပ်ကရိယာ များကို နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်း နှင့် နာဆာ အာကာသ လွန်းပျံယာဉ်များ အတွက် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များမှ စ၍ ကနေဒါ၏ လေကြောင်းနှင့် အာကာသ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှ ဂြိုဟ်တု အများအပြားကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ရေဒါဆက်-၁၊ ရေဒါဆက်-၂၊ အိုင်အက်စ်အိုင်အက်စ် နှင့် အမ်အိုအက်စ်တီ အစရှိသော ဂြိုဟ်တုများ ပါဝင်သည်။ ကနေဒါသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အအောင်မြင်ဆုံး နှင့် အသုံးအများဆုံး ဘလက်ဘရန့် ဟုခေါ်သည့် ဆောင်းဒင်းရော့ကက် သို့ ကမ္ဘာကို တစိတ်တပိုင်း ပတ်နိုင်သော ရော့ကက်များ ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဘလက်ဘရန့် ရော့ကက်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကို လွှတ်ထုတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ ၃၃,၄၇၆,၆၈၈ ဦးမျှ ရှိပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် စာရင်းမှ ၅.၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မျှ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။  ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကနေဒါ စာရင်းဇယား ဌာနမှ လူဦးရေ ၃၅ သန်းကျော် ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့ပြီး ဂျီအိတ်နိုင်ငံများတွင် သိသာစွာ အလျှင်အမြန် တိုးပွားလာသည့် နှုန်းပင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကြားတွင် လူဦးရေ ၅.၆ သန်းမျှ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၂၀.၄ ရာနှုန်းမျှ တိုးတက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ တိုးပွားရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ များပြားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး သဘာဝ အလျောက် တိုးပွားလာမှုမှာ နည်းပါးသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်း အရ ကနေဒါနိုင်ငံရှိ အကြီးဆုံးသော မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသများ
တိုရွန်တိုမြို့ အွန်တေးရီးယိုး 5,583,064 လန်ဒန်မြို့ အွန်တေးရီးယိုး 474,786
မွန်းထရီးအောမြို့ ကွီဗက် 3,824,221 စိန့်ကက်သရင်းမြို့-နိုင်အာဂရာမြို့ အွန်တေးရီးယိုး 392,184
ဗန်ကူးဗားမြို့ ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ 2,313,328 ဟယ်လီဖက်စ်မြို့ နိုဗာစကိုးရှား 390,328
အော့တဝါမြို့-ဂက်တီနောမြို့ အွန်တေးရီးယိုး- ကွီဗက် 1,236,324 အိုရှာဝါမြို့ အွန်တေးရီးယိုး 356,177
ကယ်လ်ဂရီမြို့ အယ်လဗားတား 1,214,839 ဝိတိုရိယမြို့ ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ 344,615
အက်ဒမန်တန်မြို့ အယ်လဗားတား 1,159,869 ဝင်ဆာမြို့ အွန်တေးရီးယိုး 319,246
ကွီဗက်မြို့ ကွီဗက် 0765,706 ဆက်ကတွန်းမြို့ ဆက်စကက်ချီဝမ် 260,600
ဝင်နီပက်မြို့ မနီတိုးဗား 0730,018 ရီဂျိုင်းနားမြို့ ဆက်စကက်ချီဝမ် 210,556
ဟယ်လ်မင်တန်မြို့ အွန်တေးရီးယိုး 0721,053 ရှားဘရွတ်မြို့ ကွီဗက် 201,890
ကစ်ချင်နာ-ကိန်းဘရစ်ချ်-ဝါတာလူး အွန်တေးရီးယိုး 0477,160 စိန့်ဂျွန်မြို့ နယူးဖောင်လန် နှင့် လာဘရာဒေါ 196,966
ကနေဒါနိုင်ငံသားများ၏ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖြည့်သွင်းသော လူမျိုးရင်း(၂၀၁၁ လူဦးရေ စာရင်းအရ)
ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု (၂၀၁၁ စစ်တမ်းအရ)
လူဦးရေ ၏ ၅ပုံ ၄ပုံခန့်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယ်စပ်မှ ၉၃ မိုင် (၁၅၀ ကီလိုမီတာ) အတွင်း နေထိုင်ကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော ကနေဒါနိုင်ငံသားတို့သည် မြို့ပြတွင် နေထိုင်ကြပြီး ကွီးဗက်စီးတီး-ဝင်ဆာစင်္ကြန်ဒေသ၊ ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာ၏ အနိမ့်ပိုင်း ပင်မကုန်းမြေ ဒေသ နှင့် အယ်လဗားတားရှိ ကယ်လ်ဂရီ-အက်ဒမန်တန် စင်္ကြန်ဒေသ တို့တွင် စုဝေးနေထိုင်ကြသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသည် မြောက်လတ္တီကျု ၈၃ ဒီဂရီ မှ ၄၁ ဒီဂရီ အကြားတွင် တည်ရှိပြီး ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသော လူဦးရေမှာ မြောက်လတ္တီကျု ၅၅ ဒီဂရီ၏ အောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။ အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် ကနေဒါတွင် အသက်ကြီးသော လူဦးရေ ပိုများလာပြီး အငြိမ်းစားများက အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ဦးရေထက် ပို၍ များပြားသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပျမ်းမျှ အသက်မှာ ၃၉.၅ နှစ် ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၃၉.၉ နှစ်သို့ မြင့်တက်လာသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လူတစ်ဦးချင်း၏ ပျမ်းမျှ သက်တမ်းမှာ ၈၁ နှစ်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အင်န်ဘီစီ ရုပ်သံဌာန၏ သတင်းအရ ကနေဒါသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပညာ အတတ်ဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ တက္ကသိုလ် ကောလိပ် ပညာရေး သင်ကြားတတ်မြောက်မှုတွင် ကမ္ဘာ့ နံပါတ် ၁ အဆင့် ရှိပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် အိုအီးစီဒီ စစ်တမ်း အရ ကနေဒါရှိ အရွယ်ရောက်သူများ၏ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အနည်းဆုံး ကောလိပ် သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိကြသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်များနှင့် ဒေသများတွင် ပညာရေး အတွက် အထောက်အပံ့ ပေးရန် တာဝန် ရှိကြသည်။ ကျောင်း မတက် မနေရ အသက်အရွယ်မှာ ၅နှစ်-၇နှစ် မှစ၍ ၁၆နှစ်-၁၈ နှစ် အထိ ရှိကာ  အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းမှာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ဖြစ်လာစေသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၆၄ နှစ် အတွင်း အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အထက်တန်းကျောင်း ပညာရေးကို ပြီးဆုံးကြပြီး အိုအီးစီဒီ၏ ပျမ်းမျမှာ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ၂၅ နှစ် မှ ၆၄ နှစ်အတွင်း ကနေဒါရှိ လူဦးရေ၏ ၄၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အထက်တန်းကျောင်းလွန် ပညာရေး ရှိကြပြီး အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၄ နှစ်အတွင်းမှာ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသာများ အကဲခတ်အဖွဲ့၏ အဆိုအရ ကနေဒါ ကျောင်းသားများသည် အိုအီးစီဒီ နိုင်ငံများ၏ ပျမ်းမျှထက် ကျော်လွန်ထူးချွန်ပြီး အထူးသဖြင့် သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ နှင့် စာဖတ်ခြင်းတို့တွင် ထူးချွန်ကြသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် လူဦးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အများဆုံး ရှိသော နိုင်ငံများထဲတွင် ပါဝင်ပြီး စီးပွားရေး ပေါ်လစီများနှင့် မိသားစု ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ကိစ္စရပ်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စံချိန်အဖြစ် လူပေါင်း ၂၈၀,၆၃၆ ဦး ကနေဒါသို့ ရွှေ့ပြောင်း ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း ကနေဒါ အစိုးရမှ အမြဲတမ်း နေထိုင်သူ အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့လာမည့်သူ ၂၆၀,၀၀၀ ဦးမှ ၂၈၅,၀၀၀ ဦး အထိ ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး လတ်တလော နှစ်မျာနှင့် တူညီ​သော ဦးရေ ဖြစ်သည်။ အသစ်ပြောင်းရွှေ့ ဝင်ရောက်လာသူများမှာ မြို့ပြများ ဖြစ်သော တိုရွန်တိုမြို့၊ မွန်းထရီအောမြို့ နှင့် ဗန်ကူးဗားမြို့များတွင် အများအားဖြင့် အခြေချ နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ ကနေဒါသည် ဒုက္ခသည် အများအပြားကိုလည်း လက်ခံပေးပြီး တကမ္ဘာလုံး နှစ်စဉ် လက်ခံပေးသည့် ဒုက္ခသည်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှသည် ကနေဒါသို့ ခိုလှုံ ဝင်ရောက်၍ အခြေချ ကြသည်။ 
၂၀၀၆ ခုနှစ် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ စာရင်းအရ ကနေဒါနိုင်ငံသားများ၏ မိမိကိုယ်တိုင် ဖြည့်သွင်းသော လူမျိုးရင်းများတွင် အများဆုံးမှာ ကနေဒီယန် ဖြစ်ပြီး (လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်း) ၎င်း၏ နောက်တွင် အင်္ဂလိပ် လူမျိုး (၂၁%) ၊ ပြင်သစ် ( ၁၅.၈%) ၊ စကော့လူမျိုး ( ၁၅.၁%) ၊ အိုင်းရစ်ရှ် (၁၃.၉%) ၊ ဂျာမန် (၁၀.၂%) ၊ အီတလီ (၄.၆%)၊ တရုတ် (၄.၃%) ၊ ဖတ်စ်နေးရှင်း (၄.၀%) ၊ ယူကရိန်း (၃.၉%) နှင့် ဒတ်ချ် ( ၃.၃%) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ အသိအမှတ် ပြုထားသော ဖတ်စ်နေးရှင်း အုပ်စိုးသူ နှင့် လူမျိုးစု ပေါင်း ၆၀၀ ခန့် ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁,၁၇၂,၇၉၀ ဦး ခန့် ရှိသည်။ 
၂၀၀၆ တွင် ကနေဒါရှိ ရှေးဦးနေထိုင်သူများ၏ လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်းမှာ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံး တိုးပွားနှုန်း၏ နှစ်ဆခန့်မျှ ရှိပြီး ကနေဒါနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သည် ရှေးဦးနေထိုင်သူ အဖြစ် မိမိတို့ဘာသာ ခံယူကြသည်။ လူဦးရေ၏ အခြားသော ၁၆.၂ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရှေးဦးနေထိုင်သူ မဟုတ်သော အခြားသော လူနည်းစု လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သိသာထင်ရှားသော လူနည်းစု လူမျိုး များမှာ တောင်အာရှသား (၄.၀%) ၊ တရုတ် (၃.၉%) နှင့် လူမည်း (၂.၅%) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၀၁ မှ ၂၀၀၆ ကြားတွင် သိသာထင်ရှားသော လူနည်းစု လူမျိုးများ၏ လူဦးရေမှာ ၂၇.၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် အခါက လူနည်းစု လူမျိုးများမှာ ကနေဒါ လူဦးရေ ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်း အောက် ( ၃၀၀,၀၀၀ သိန်းခန့်) သာ ရှိသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်သို့ ရောက်သော အခါ ၅ ယောက်တွင် ၁ ယောက် (၁၉.၈%) မှာ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် မွေးဖွားသူများ ဖြစ်ကြပြီး အသစ်ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်လာသူ၏ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အာရှမှ ဖြစ်ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်း မှလည်း ပါဝင်သည်။ ကနေဒါသို့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာသူများ၏ အဓိက ရင်းမြစ်နိုင်ငံများမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကနေဒါ စာရင်းဇယား ဌာန၏ အဆို အရ သိသာသော လူနည်းစု လူမျိုးစုများသည် ၂၀၃၁ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ၏ ၃ ပုံ ၁ ပုံမျှ ဖြစ်လာနိုင်သည် ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည် ဘာသာတရား မျိုးစုံရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာများ အများအပြားပင် ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် လူဦးရေ စာရင်း အရ ကနေဒါနိုင်ငံသားတို့၏ ၆၇ % မှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ပြီး ရိုမန်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်များမှာ ၃၈.၇% အထိ ရှိပြီး အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ပရိုတက်စတင့် ခရစ်ယာန်များတွင် ယူနိုက်တက် ကနေဒါ ဘုရားကျောင်း အသင်းတော်တွင် ၆.၁ % ရှိပြီး အန်ဂလီကန် တွင် ၅.၀% ရှိကာ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များမှာ ၁.၉% ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၌ ၂၃.၉% မှာ ဘာသာမဲ အဖြစ် ကြေငြာကြပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်က ဘာသာမဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၁၆.၅% သာ ရှိသည်။ ကျန်ရှိသော ၈.၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော ဘာသာများကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ၃.၂% ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၁.၅% ပါဝင်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသား အများစုမှာ ဘာသာတရားသည် ၎င်းတို့ ရှင်သန်လှုပ်ရှား နေထိုင်ကြသော နေ့စဉ်ဘဝ၏ အရေးကြီးသော နေရာတွင် မပါဝင်ဟု ယူဆကြသော်လည်း ဘုရားသခင်ကိုမူ ယုံကြည်ကြသည်။ ဘာသာတရား ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း နှင့် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စသာလျှင် ဖြစ်သည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆကြသည်။ ကနေဒါတွင် တရားဝင် နိုင်ငံတော် ဘုရားကျောင်းဟူ၍ မရှိဘဲ အစိုးရက လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်မှု ကို တရားဝင် အားပေးသည်။
ကနေဒါ လွတ်လပ်မှုနှင့် အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ချာတာ အခန်း (၁၆) နှင့် ဖက်ဒရယ် ရုံးသုံး ဘာသာစကား အက်ဥပဒေ အရ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ နှင့် ပြင်သစ်ဘာသာ နှစ်မျိုးကို ရုံးသုံးဘာသာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ကနေဒါ ဖက်ဒရယ် အစိုးရသည် ဘာသာစကား နှစ်မျိုးစလုံးကို တရားဝင် သုံးစွဲပြီး ရုံးသုံးဘာသာစကား ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး မှ ဆောင်ရွက်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှင့် ပြင်သစ်ဘာသာစကား နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဖက်ဒရယ် တရားရုံးများ၊ ပါလီမန် နှင့် အခြားသော ဖက်ဒရယ် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးတွင် ညီမျှသော အခြေအနေ ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအားလုံးတွင် လုံလောက်သော အသုံးပြုသူ ရှိပါက အစိုးရ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အင်္ဂလိပ် သို့မဟုတ် ပြင်သစ် ဘာသာစကားဖြင့် တောင်းဆိုရန် အခွင့်အရေး ရှိပြီး အခြားသော လူနည်းစု ဘာသာစကားများကိုလည်း အခြားသော ပြည်နယ်များနှင့် ဒေသများ၏ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတွင် အာမခံချက် ပေးထားသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသားများ၏ ၉၈% ခန့်မှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား နှင့် ပြင်သစ်ဘာသာ စကား နှစ်မျိုးစလုံးကို သော်လည်းကောင်း တစ်မျိုးမျိုးကိုသော်လည်းကောင်း ပြောဆိုကြသည်။Approximately 98% of Canadians can speak English and/or French.
အင်္ဂလိပ် – ၅၆.၉%
အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ် (နှစ်မျိုးစလုံး) – ၁၆.၁%
ပြင်သစ် – ၂၁.၃%
လူဦးရေကြဲပြန့်သော ဒေသ( ၁ စတုရန်း ကီလိုမီတာလျှင် လူ ၀.၄ ဦး)
အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ်ဘာသာစကားတို့သည် လူဦးရေ ၅၉.၇% နှင့် ၂၃.၂ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးတို့၏ ပထမ ဘာသာစကား ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ် နှစ်ဘာသာစလုံး သို့မဟုတ် ဘာသာစကား တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုကြပြီး ၅၇.၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား တစ်မျိုးတည်း၊ ၂၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပြင်သစ်ဘာသာ စကား တစ်မျိုးတည်းနှင့် ၁၇.၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဘာသာစကား နှစ်မျိုးစလုံးကို ပြောဆိုကြသည်။ အင်္ဂလိပ် နှင့် ပြင်သစ်ဘာသာစကားကို ပထမဘာသာ အဖြစ် အသုံးပြုသော လူအုပ်စုမှာ လူဦးရေ၏ ၇၃.၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ၂၃.၆ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး ရှိကြသည်။
၁၉၇၇ ခုနှစ် ပြင်သစ်ဘာသာစကား ချာတာ အရ ကွီးဗက်၏ ရုံးသုံးဘာသာ စကားကို ပြင်သစ်ဘာသာစကား အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့သည်။ ပြင်သစ်ဘာသာ စကား အသုံးပြုသော ကနေဒါနိုင်ငံသား များ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကွီးဗက်တွင် နေကြသော်လည်း အွန်တေးရီးယိုး၊ အယ်လဗားတား နှင့် မနီတိုဗာ တောင်ပိုင်းတို့တွင် သိသာထင်ရှားသော ပြင်သစ်စကားပြော လူဦးရေ ရှိသည်။ အွန်တေးရီးယိုးတွင် ကွီးဗက်ပြင်ပ၌ အများဆုံးသော ပြင်သစ်စကားပြော လူဦးရေ ရှိသည်။ နယူးဘရန်းဝစ်မှာ တရားဝင် ရုံးသုံးဘာသာစကား နှစ်မျိုးသုံးသော တစ်ခုတည်းသော ပြည်နယ် ဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်စကားပြောသော လူနည်းစု အကေးဒီးယန်း ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း မျှ ရှိသည်။ အကေးဒီးယန်း လူမျိုးစုများမှာ နိုဗာစကိုးရှား၏ အနောက်တောင်ပိုင်း၊ ကိပ်ဘရက်တန် ကျွန်းပေါ် နှင့် ပရင့်စ်အက်ဒွပ်ကျွန်း၏ အလယ်ပိုင်း နှင့် အနောက်ပိုင်းတို့တွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။
အခြားပြည်နယ်များတွင် ရုံးသုံးဘာသာစကား မသတ်မှတ်ထားပေ။ သို့သော်လည်း စာသင်ကျောင်းများ၊ တရားရုံးများနှင့် အခြားသော အစိုးရ ဌာနများတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား အပြင် ပြင်သစ်ဘာသာစကား ကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။ မနီတိုဗာ၊ အွန်တေးရီးယိုး နှင့် ကွီးဗက်တို့တွင် ဒေသဆိုင်ရာ တရားဥပဒေပြု လွှတ်တော်များ၌ အင်္ဂလိပ် နှင့် ပြင်သစ် နှစ်ဘာသာ စလုံးကို ပြောဆိုကြပြီး ဥပဒေများကိုလည်း နှစ်ဘာသာ စလုံးဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းကြသည်။ အွန်တေးရီးယိုးတွင် ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် တစ်ခု ရှိသော်လည်း တွဲဖက်ရုံးသုံး ဘာသာစကား မဟုတ်ပေ။  ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့၏ ဘာသာစကား ၁၁ မျိုးရှိပြီး ဒေသဆိုင်ရာသုံး အမျိုးကွဲ ၆၅ မျိုးမျှ ရှိသည်။ ထိုဘာသာစကားများထဲတွင် ခရီး၊ အင်နွတ်တီတု နှင့် အိုဂျစ်ဘ်ဝေးတို့သာလျှင် ရေရှည်တည်တံနိုင်မည့် ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်သူ အများအပြား ရှိသည့် ဘာသာစကားများ ဖြစ်ကြသည်။ အချို့သော ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့ သုံးစွဲသည့် ဘာသာစကားများမှာ အနောက်မြောက်ဒေသတွင် တရားဝင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရှိသည်။ အင်နွတ်တီတုသည် နူနာဗု ဒေသတွင် အဓိက ဘာသာစကား ဖြစ်ပြီး ထိုဒေသရှိ ရုံးသုံးဘာသာစကား ၃ ခုထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ 
၂၀၁၁ ခုနှစ် ကနေဒါ လူဦးရေ စာရင်းအရ ကနေဒါနိုင်ငံသား ၆.၈ သန်းတို့သည် ရုံးသုံးဘာသာစကား မဟုတ်သော ဘာသာစကားကို ၎င်းတို့၏ မိခင်ဘာသာစကား အဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကား မဟုတ်သော ဘာသာစကားများထဲမှ ပထမဘာသာ အဖြစ် အသုံးပြုကြသော ဘာသာစကားများမှာ တရုတ် (အဓိကအားဖြင့် ကန်တုံဘာသာ၊ ပြောဆိုသူ ၁,၀၇၂,၅၅၅ ဦး) ၊ ပန်ချာပီ ဘာသာ (၄၃၀,၇၀၅ ဦး)၊ စပိန်ဘာသာ (၄၁၀,၆၇၀ဦး)) ၊ ဂျာမန်ဘာသာ (၄၀၉,၂၀၀ ဦး) နှင့် အီတလီဘာသာ (၄၀၇,၄၉၀ ဦး) တို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြသည်။
ဘီလ်ရိတ်ဒ်၏ ၁၉၈၀ ခုနှစ် လက်ရာ ကျီးနက်ကြီးနှင့် ပထမလူ။ ကျီးနက်ကြီးသည် ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့၏ ဒဏ္ဍာရီများ၏ ထင်ရှားသော ပုံရိပ်တစ်ခု ပင် ဖြစ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုသည် မှီတင်းနေထိုင်ရာ လူမျိုးစု အသီးသီးတို့၏ လွှမ်းမိုးမှု ရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှု ပေါင်းစုံ ရောနှောယှက်နွယ်ခြင်းကို အားပေးသည့် ပေါ်လစီများကို အခြေခံ ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ်ပေးထားသည်။ ကွီဗက်တွင်မူ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ မှာ ခိုင်မာပြီး ပြင်သစ်စကားပြောသူများက ကွီဗက်၏ ယဉ်ကျေးမှုသည် အင်္ဂလိပ်ကနေဒီယန် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မတူဘဲ သီးသန့်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံး အနေနှင့်မူ ကနေဒါသည် ဘာသာရေး၊ ရှေးဦးနေထိုင်သူနှင့် လူမျိုးစု ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု ပေါင်းစုံ ရောစပ် အလှဆင်ထားသော ယဉ်ကျေးမှု ပန်းချီကားကြီး တစ်ချပ်နှင့် အလားသဏ္ဍန် တူသည်။ အများပိုင် ပိုက်ဆံဖြင့် ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ အခွန်အခနှုန်း မြင့်မားခြင်း၊ ငွေကြေး မညီမျှမှုကို ထိန်းညှိပေးခြင်း၊ သေဒဏ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရန် အလွန်အားထုတ် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုကို ချုပ်ထိန်းခြင်းနှင့် လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းကို တရားဝင် ခွင့်ပြုခြင်း စသည်တို့မှာ ကနေဒါ၏ ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးများကို ညွှန်ပြနေသော အရာများပင် ဖြစ်သည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ ကနေဒါယဉ်ကျေးမှုသည် ဗြိတိသျှ၊ ပြင်သစ် နှင့် ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ထုံးတမ်းစဉ်လာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရသည်။ ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာစကား၊ အနုပညာ နှင့် ဂီတ တို့မှ တစ်ဆင့် ကနေဒါ၏ ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာကို ဆက်လက် လွှမ်းမိုးနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသား အများစုမှာ ယဉ်ကျေးမှုများ ရောနှောယှက်နွယ်နေသည်ကို တန်ဖိုးထားကြပြီး ကနေဒါနိုင်ငံအား နဂိုမူလကတည်းက ယဉ်ကျေးမှုများ ရောနှောယှက်နွယ်နေရာ နေရာ အဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ အမေရိကန်မှ မီဒီယာနှင့် ဖျော်ဖြေရေးတို့မှာ အင်္ဂလိပ် စကားပြောသော ကနေဒါ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အဓိက နေရာ မရှိလျှင်ပင် လူကြိုက်များသည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ အလားတူပင် ကနေဒါမှ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဖျော်ဖြေရေးသမားတို့မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် အောင်မြင်ကြသည်။ ကနေဒါ၏ ထင်ရှားသော ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ဖက်ဒရယ် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များ၊ ဥပဒေများ အပြင် ကနေဒါ အသံလွှင့်ဌာန(CBC) ၊ ကနေဒါ အမျိုးသား ရုပ်ရှင် ဘုတ်အဖွဲ့(NFB) နှင့် ကနေဒါ ရေဒီယို၊ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကော်မရှင် (CRTC) အစရှိသော အဖွဲ့အစည်းများက ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြသည်။
ကနေဒါ အမျိုးသား ပန်းချီပြတိုက်တွင် စုဆောင်းထားသော ၁၉၁၆ ခုနှစ် ရေးဆွဲသည့် တွမ် သွန်မဆင် ၏ လက်ရာ ဂျက်ထင်းရူးပင်
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အနုပညာလောကတွင် နိုင်ငံ၏ အကျော်ကြားဆုံး ပန်းချီဆရာ အဖြစ် အသိအမှတ် ပြု ခြင်းခံရသော တွမ် သွန်မဆင် ကဲ့သို့သော ပန်းချီဆရာများနှင့် ခုနစ်ယောက် အဖွဲ့ ပန်းချီဆရာများမှာ ထင်ရှားသည်။ သွန်မဆင်သည် ကနေဒါ ရှုခင်းပန်းချီကားများကို ၎င်း သေဆုံးချိန် ၁၉၁၇ ခုနှစ် အသက် ၃၉ နှစ်တိုင်အောင် အလုပ်တစ်ခု အနေနှင့် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ပန်းချီဆရာ ခုနှစ်ယောက် အဖွဲ့မှာမူ ဝိဉာဏ ဝါဒနှင့် အမျိုးသားရေး အတွက် ဦးတည်ချက်ထား ရေးဆွဲကြပြီး သူတို့၏ ခြားနားသော လက်ရာများကို ၁၉၂၀ မေလတွင် ပထမဆုံး ပြသခဲ့ကြသည်။ ခုနစ်ယောက် အဖွဲ့ဟု ခေါ်ဆိုကြသော်လည်း အဖွဲ့၏ အိုင်ဒီယာများကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူများမှာ လောရင် ဟဲရစ်၊ အေ ဝိုင် ဂျက်ဆန်၊ အာသာ လစ်ဆမာ၊ ဂျေ အီး အိတ်ချ် မက်ဒေါ်နယ် နှင့် ဖရက်ဒရစ် ဗာလီ တို့ ၅ ဦး ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အား ဖရန့် ဂျွန်စတန် နှင့် စီးပွားဖြစ် ရေးဆွဲသည့် ပန်းချီဆရာ ဖြစ်သော ဖရန်ကလင် ကာမိုက်ကယ်မှ များမကြာမီ အချိန်တွင် ဝင်ရောက် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၁၉၂၆ တွင် ပန်းချီဆရာ အေ ဂျေ ကက်ဆန်သည် အဖွဲ့တွင်းသို့ ဝင်ရောက် လာခဲ့သည်။ အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်နေသော အခြား ထင်ရှား ပန်းချီဆရာ တစ်ဦးမှာ အယ်မလီ ကားရ် ဖြစ်ပြီး သူမမှာ ရှုခင်းပုံများနှင့် ပစိဖိတ် အနောက်မြောက် ကမ်းရိုးတန်းရှိ ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့၏ ပုံများကို ရေးဆွဲရာတွင် လူသိများသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှစ၍ အိနွတ်တို့၏ အနုပညာ လက်ရာများကို ကနေဒါ အစိုးရမှ နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်တော်များသို့ ပေးအပ်လေ့ ရှိခဲ့သည်။
ကနေဒါ ဂီတ အသိုင်းအဝိုင်းမှ နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော တေးရေးဆရာများ၊ ဂီတပညာရှင်များ နှင့် တီးဝိုင်းကြီးများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအတွင်း တေးဂီတ ထုတ်လွှင့်ခြင်းကို စီအာရ်တီစီ မှ ကြီးကြပ်သည်။ ကနေဒါ အသံသွင်း အနုပညာနှင့် သိပ္ပံ အကယ်ဒမီမှ ကနေဒါ ဂီတဆု ဖြစ်သော ဂျူနိုဆုကို ပေးအပ်ပြီး ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှ စတင် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ မျိုးချစ်သီချင်းများမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀၀ ခန့်ကတည်းက ရှိခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှ မျိုးချစ်စိတ်မှ သီးခြား ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသော အမျိုးအစားကွဲ တစ်ခု ဖြစ်ကာ ပထမဆုံး လွတ်လပ်ရေး အတွက် ဥပဒေ ရေးရာ ကြိုးပမ်းမှု ခြေလှမ်း မတိုင်မီ နှစ် ၅၀ ခန့်ကပင် ရှိခဲ့သည်။ အစောဆုံး ဖြစ်သော ရဲရင့်သည့် ကနေဒါနိုင်ငံသား သီချင်းကို ၁၈၁၂ တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် သီချင်းဖြစ်သော အို ကနေဒါ ကို ကွီဗက်၏ ဘုရင်ခံ ဖြစ်သော သီအိုဒိုး ရိုဘီတိုင်းမှ စိန့်ဂျင်း နှစ်ခြင်းနေ့ အတွက် ဦးစွာ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ တွင် တရားဝင် နိုင်ငံတော် သီချင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဂီတသံစဉ်ကို ဖွဲ့သီသူမှာ ကယ်လီဆာ လာဗဲလ်လီ ဖြစ်ပြီး ကဗျာဆရာ နှင့် တရားသူကြီး တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သော အဒေါ့ ဘာဆေး ရူသီယာ ၏ မျိုးချစ် ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို အခြေခံ ရေးဖွဲ့ ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ စာသားမှာ မူလက ပြင်သစ် ဘာသာဖြင့် ဖြစ်သော်လည်း ၁၉၀၆ တွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ဗန်ကူးဗား ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲတွင် ကနေဒါ ရေခဲပြင် ဟော်ကီ အသင်း အောင်ပွဲခံနေပုံ
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အားကစား လှုပ်ရှားမှု သမိုင်းမှာ ၁၇၇၀ ခုနှစ်များမှ စတင်ခဲ့သည်။ ကနေဒါ၏တရားဝင် နိုင်ငံတော် အားကစားနည်းများမှာ ရေခဲပြင် ဟော်ကီ ကစားနည်းနှင့် လာခရော့စ် ကစားနည်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ကနေဒါ၏ မက်ထရိုပိုလစ်တန် ဒေသကြီး ရှစ်ခုထဲမှ ခုနစ်ခု ဖြစ်သော တိုရွန်တို၊ မွန်းထရီအော၊ ဗန်ကူးဗား၊ အော့တဝ၊ ကယ်လ်ဂရီ၊ အက်ဒမန်တန် နှင့် ဝင်နီပက် တို့တွင် နေရှင်နယ် ဟော်ကီ လိခ် ၏ အသင်းများ အသီးသီး ရှိကြပြီး ကွီဗက်မြို့တွင် ကွီဗက်နော်ဒစ် ဟူသော ဟော်ကီအသင်း ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ တွင် ကော်လိုရာဒိုသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ အခြား လူကြည့်များသော အားကစားနည်းများမှာ ရေခဲပြင်တွင် ဒိုးပစ် ကစားရသော ကားလင်း အားကစားနည်း နှင့် ကနေဒါ ဘောလုံး ကစားနည်းတို့ ဖြစ်ကာ ကနေဒါ ဘောလုံးကို ကနေဒါ ဘောလုံး လိခ်တွင် ကြေးစား ကစားကြသည်။ ဂေါက်သီး၊ တင်းနစ်၊ ဘေ့စ်ဘောလ်၊ စကီး၊ ခရစ်ကက်၊ ဘော်လီဘော၊ ရက်ဂ်ဘီ ယူနီယံ၊ ဘောလုံး နှင့် ဘက်စကက်ဘော ကစားနည်းတို့ကို လူငယ်များ နှင့် အပျော်တမ်းကစားရာတွင် အများအပြား ကစားကြသော်လည်း ကြေးစားပြိုင်ပွဲများနှင့် ကလပ်အသင်းများမှာ များများစားစား မရှိပေ။ သို့သော်လည်း ကနေဒါတွင် ကြေးစား ဘေ့စ်ဘော အသင်း တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ်၊ ကြေးစား ဘတ်စကက်ဘော အသင်း တိုရွန်တို ရက်ပ်တာ နှင့် အဓိက ဘောလုံးကလပ် ၃ ခု ဖြစ်သော တိုရွန်တို အက်ဖ်စီ၊ ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကပ် အက်ဖ်စီ နှင့် မွန်းထရီအော အင်ပက် တို့ ရှိသည်။ ကနေဒါသည် ၁၉၀၀ ခုနှစ် အိုလံပစ် ကစားပွဲ စတင်သည့် အချိန်မှစ၍ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတိုင်း လိုလို တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် အားကစားပွဲများ ဖြစ်သော ၁၉၇၆ နွေရာသီ အိုလံပစ်ကို မွန်းထရီအော မြို့တွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၈ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် ကစားပွဲကို ကယ်လ်ဂရီမြို့တွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၄ ကမ္ဘာ့ ဘက်စကက်ဘော ချန်ပီယံ ပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၀၇ အသက် ၂၀ အောက် ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ နှင့် ၂၀၁၀ ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် အားကစားပွဲတို့ကို ဗန်ကူးဗား မြို့ နှင့် ဗြိတိသျှ ကိုလံဘီယာရှိ ဝစ်စလာ တို့တွင်လည်းကောင်း အိမ်ရှင်အဖြစ် အသီးသီး လက်ခံ ကျင်းပခဲ့သည်။
ကနေဒါ၏ နိုင်ငံတော် ပြယုဂ် သည် သဘာဝ၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ရှေးဦးနေထိုင်သူတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုများ ပါဝင်သည်။ မေပယ်လ်ရွက်ကို ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပြယုဂ် အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းမှာ ၁၈ ရာစု အစောပိုင်းမှ စတင်ခဲ့သည်။ မေပယ်လ်ရွက်ကို ယခု လက်ရှိနှင့် ယခင် ကနေဒါ အလံတို့ အပြင် ကနေဒါ၏ အမှတ်တံဆိပ် တို့တွင် အသုံးပြု ထားသည်။ အခြား ထင်ရှားသော ပြယုဂ်များမှာ ဘီဗာဖျံ ၊ ကနေဒါ ငန်း ၊ ရေဝမ်းဘဲ၊ သရဖူ၊ တော်ဝင် ကနေဒါ မြင်းစီး ပုလိပ် နှင့် လတ်တလောတွင် တိုတန်ပိုးလ် ခေါ် ကိုယ်စားပြု အရုပ်များ ချယ်သထားရာ တိုင် နှင့် အိနွတ်ဆွတ် ရုပ်ထုတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကနေဒါ နိုင်ငံသုံး ငွေအကြွေစေ့များတွင် ထို အမှတ်အသားများကို ရိုက်နှိပ်ထားပြီး တစ်ဒေါ်လာ အကြွေစေ့တွင် ရေဝမ်းဘဲ ပုံကို လည်းကောင်း၊ ၅၀ ဆင့် အကြွေစေ့တွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အမှတ်တံဆိပ်ကို လည်းကောင်း၊ နစ်ကယ် အကြွေစေ့တွင် ဘီဗာဖျံ ပုံကို လည်းကောင်းရိုက်နှိပ်ထားပြီး မေပယ်လ်ရွက်ပုံ ရိုက်နှိပ်ထားသော ပဲနိစေ့ကို ၂၀၁၃ တွင် သုံးစွဲခြင်းမှ ရပ်တန့်ခဲ့သည်။
↑ Official Languages Act (PDF)။ Revised Statutes of NWT, 1988။ Department of Justice, Northwest Territories။ 2009-11-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ D'Aquino၊ Thomas (1983)။ Parliamentary democracy in Canada: issues for reform။ ITP Nelson။ p. 2။ ISBN 0458962902။ Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (အကူအညီ)
↑ Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories – 20% sample data။ Statistics Canada (2008-01-04)။ 2009-10-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ Canada။ International Monetary Fund။ 2009-10-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Human Development Report 2009။ United Nations (2009)။ 2009-10-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ James Stuart Olson; Robert Shadle (1991)။ Historical Dictionary of European Imperialism။ Greenwood Publishing Group။ p. 109။ ISBN 978-0-313-26257-9။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ Alan Rayburn (2001)။ Naming Canada: Stories about Canadian Place Names။ University of Toronto Press။ pp. 14–22။ ISBN 978-0-8020-8293-0။
↑ Paul R. Magocsi (1999)။ Encyclopedia of Canada's Peoples။ University of Toronto Press။ p. 1048။ ISBN 978-0-8020-2938-6။
↑ Great Britain (1841)။ An Act to Re-write the Provinces of Upper and Lower Canada, and for the Government of Canada။ J.C. Fisher & W. Kimble။ p. 20။
↑ O'Toole၊ Roger (2009)။ "Dominion of the Gods: Religious continuity and change inaCanadian context"။ in Hvithamar, Annika; Warburg, Margit; Jacobsen, Brian Arly (ed.)။ Holy nations and global identities: civil religion, nationalism, and globalisation။ Brill။ p. 137။ ISBN 978-90-04-17828-1။ CS1 maint: multiple names: editors list (link)
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ Buckner, Philip, ed. (2008)။ Canada and the British Empire။ Oxford University Press။ pp. 37–40, 56–59, 114, 124–125။ ISBN 978-0-19-927164-1။
↑ John Courtney; David Smith (2010)။ The Oxford Handbook of Canadian Politics။ Oxford Handbooks Online။ p. 114။ ISBN 978-0-19-533535-4။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Christoph Beat Graber; Karolina Kuprecht; Jessica C. Lai (2012)။ International Trade in Indigenous Cultural Heritage: Legal and Policy Issues။ Edward Elgar Publishing။ p. 366။ ISBN 978-0-85793-831-2။
↑ Linda S. Cordell; Kent Lightfoot; Francis McManamon; George Milner (2008)။ Archaeology in America: An Encyclopedia။ 4။ ABC-CLIO။ p. 3။ ISBN 978-0-313-02189-3။
↑ Timothy R. Pauketat (2012)။ The Oxford Handbook of North American Archaeology။ Oxford University Press။ p. 96။ ISBN 978-0-19-538011-8။
↑ Thomas D. Dillehay (2008)။ The Settlement of the Americas: A New Prehistory။ Basic Books။ p. 61။ ISBN 978-0-7867-2543-4။
↑ Center for Archaeological Sciences Norman Herz Professor of Geology and Director; Society of Archaelogical Sciences both at University of Georgia Ervan G. Garrison Associate Professor of Anthropology and Geology and President (1997)။ Geological Methods for Archaeology။ Oxford University Press။ p. 125။ ISBN 978-0-19-802511-5။
↑ Hayes၊ Derek (2008)။ Canada: an illustrated history။ Douglas & Mcintyre။ pp. 7, 13။ ISBN 978-1-55365-259-5။
↑ Macklem၊ Patrick (2001)။ Indigenous difference and the Constitution of Canada။ University of Toronto Press။ p. 170။ ISBN 978-0-8020-4195-1။
↑ Sonneborn၊ Liz (January 2007)။ Chronology of American Indian History။ Infobase Publishing။ pp. 2–12။ ISBN 978-0-8160-6770-1။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ ၂၁.၂ Wilson၊ Donna M; Northcott, Herbert C (2008)။ Dying and Death in Canada။ University of Toronto Press။ pp. 25–27။ ISBN 978-1-55111-873-4။
↑ ၂၂.၀ ၂၂.၁ Thornton၊ Russell (2000)။ "Population history of Native North Americans"။ in Haines, Michael R; Steckel, Richard Hall (eds.)။ A population history of North America။ Cambridge University Press။ pp. 13, 380။ ISBN 978-0-521-49666-7။ Cite uses deprecated parameter |editors= (အကူအညီ)
↑ O'Donnell၊ C. Vivian (2008)။ "Native Populations of Canada"။ in Bailey၊ Garrick Alan (ed.)။ Indians In Contemporary Society။ Handbook of North American Indians။ 2။ Government Printing Office။ p. 285။ ISBN 978-0-16-080388-8။
↑ True Peters၊ Stephanie (2005)။ Smallpox in the New World။ Marshall Cavendish။ p. 39။ ISBN 978-0-7614-1637-1။
↑ Preston၊ David L. (2009)။ The Texture of Contact: European and Indian Settler Communities on the Frontiers of Iroquoia, 1667–1783။ U of Nebraska Press။ pp. 43–44။ ISBN 978-0-8032-2549-7။
↑ Tanner, Adrian (1999)။ 3. Innu-Inuit 'Warfare'။ Innu Culture။ Department of Anthropology, Memorial University of Newfoundland။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Asch၊ Michael (1997)။ Aboriginal and Treaty Rights in Canada: Essays on Law, Equity, and Respect for Difference။ UBC Pres။ p. 28။ ISBN 978-0-7748-0581-0။
↑ Kirmayer၊ Laurence J.; Guthriefirst2=Gail Valaskakis (2009)။ Healing Traditions: The Mental Health of Aboriginal Peoples in Canada။ UBC Press။ p. 9။ ISBN 978-0-7748-5863-2။
↑ Reeves၊ Arthur Middleton (2009)။ The Norse Discovery of America။ BiblioLife။ p. 82။ ISBN 978-0-559-05400-6။
↑ John Cabot's voyage of 1497။ Memorial University of Newfoundland (2000)။ August 15, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Hornsby၊ Stephen J (2005)။ British Atlantic, American frontier: spaces of power in early modern British America။ University Press of New England။ pp. 14, 18–19, 22–23။ ISBN 978-1-58465-427-8။
↑ Cartier, Jacques; Biggar, Henry Percival; Cook, Ramsay (1993)။ The Voyages of Jacques Cartier။ University of Toronto Press။ p. 26။ ISBN 978-0-8020-6000-6။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ Rose, George A (October 1, 2007)။ Cod: The Ecological History of the North Atlantic Fisheries။ Breakwater Books။ p. 209။ ISBN 978-1-55081-225-1။
↑ Ninette Kelley; Michael J. Trebilcock (September 30, 2010)။ The Making of the Mosaic: A History of Canadian Immigration Policy။ University of Toronto Press။ p. 27။ ISBN 978-0-8020-9536-7။
↑ Howard Roberts LaMar (1977)။ The Reader's Encyclopedia of the American West။ University of Michigan။ p. 355။ ISBN 978-0-690-00008-5။
↑ Tucker, Spencer C; Arnold, James; Wiener, Roberta (September 30, 2011)။ The Encyclopedia of North American Indian Wars, 1607–1890: A Political, Social, and Military History။ ABC-CLIO။ p. 394။ ISBN 978-1-85109-697-8။ CS1 maint: multiple names: authors list (link)
↑ Phillip Alfred Buckner; John G. Reid (1994)။ The Atlantic Region to Confederation: A History။ University of Toronto Press။ pp. 55–56။ ISBN 978-0-8020-6977-1။
↑ Nolan, Cathal J (2008)။ Wars of the age of Louis XIV, 1650–1715: an encyclopedia of global warfare and civilization။ ABC-CLIO။ p. 160။ ISBN 978-0-313-33046-9။
↑ Allaire, Gratien (May 2007). "From "Nouvelle-France" to "Francophonie canadienne":ahistorical survey". International Journal of the Sociology of Language 2007 (185): 25–52. doi:10.1515/IJSL.2007.024.
↑ Hicks, Bruce M (March 2010). "Use of Non-Traditional Evidence: A Case Study Using Heraldry to Examine Competing Theories for Canada's Confederation". British Journal of Canadian Studies 23 (1): 87–117. doi:10.3828/bjcs.2010.5.
↑ Eric Nellis (2010)။ An Empire of Regions: A Brief History of Colonial British America။ University of Toronto Press – University of British Columbia။ p. 331။ ISBN 978-1-4426-0403-2။
↑ Todd Leahy; Raymond Wilson (September 30, 2009)။ Native American Movements။ Scarecrow Press။ p. 49။ ISBN 978-0-8108-6892-2။
↑ McNairn၊ Jeffrey L (2000)။ The capacity to judge။ University of Toronto Press။ p. 24။ ISBN 978-0-8020-4360-3။
↑ Immigration History of Canada။ Marianopolis College (2004)။ December 16, 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Irish Emigration of 1847 and Its Canadian Consequences။ cchahistory.ca။
↑ Romney, Paul (Spring 1989). "From Constitutionalism to Legalism: Trial by Jury, Responsible Government, and the Rule of Law in the Canadian Political Culture". Law and History Review7(1). University of Illinois Press. doi:10.2307/743779.
↑ Evenden၊ Leonard J; Turbeville, Daniel E (1992)။ "The Pacific Coast Borderland and Frontier"။ in Janelle, Donald G (ed.)။ Geographical snapshots of North America။ Guilford Press။ p. 52။ ISBN 978-0-89862-030-6။
↑ Dijkink၊ Gertjan; Knippenberg၊ Hans (2001)။ The Territorial Factor: Political Geography inaGlobalising World။ Amsterdam University Press။ p. 226။ ISBN 978-90-5629-188-4။
↑ ၄၉.၀ ၄၉.၁ Bothwell၊ Robert (1996)။ History of Canada Since 1867။ Michigan State University Press။ pp. 31, 207–310။ ISBN 978-0-87013-399-2။
↑ Bumsted၊ JM (1996)။ The Red River Rebellion။ Watson & Dwyer။ ISBN 978-0-920486-23-8။
↑ Sir John A. Macdonald။ Library and Archives Canada (2008)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cook၊ Terry (2000)။ The Canadian West: An Archival Odyssey through the Records of the Department of the Interior။ The Archivist။ Library and Archives Canada။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Buildinganation။ Canadian Atlas။ Canadian Geographic။ March 3, 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tennyson၊ Brian Douglas (2014)။ Canada's Great War, 1914–1918: How Canada Helped Save the British Empire and BecameaNorth American Nation။ Scarecrow Press (Cape Breton University)။ p. 4။ ISBN 978-0-8108-8860-9။
↑ ၅၅.၀ ၅၅.၁ ၅၅.၂ ၅၅.၃ ၅၅.၄ Morton၊ Desmond (1999)။ A military history of Canada (4th ed.)။ McClelland & Stewart။ pp. 130–158, 173, 203–233, 258။ ISBN 978-0-7710-6514-9။
↑ Granatstein၊ J. L. (2004)။ Canada's Army: Waging War and Keeping the Peace။ University of Toronto Press။ p. 144။ ISBN 978-0-8020-8696-9။
↑ ၅၇.၀ ၅၇.၁ McGonigal၊ Richard Morton (1962)။ The Conscription Crisis in Quebec – 1917:aStudy in Canadian Dualism။ Harvard University။ p. Intro။
↑ Hail, M (February 25, 2010). "Federalism and Representation in the Theory of the Founding Fathers: A Comparative Study of US and Canadian Constitutional Thought". Publius: the Journal of Federalism 40 (3): 366–388. doi:10.1093/publius/pjq001.
↑ Bryce၊ Robert B. (June 1, 1986)။ Maturing in Hard Times: Canada's Department of Finance through the Great Depression။ McGill-Queens။ p. 41။ ISBN 978-0-7735-0555-1။
↑ Mulvale, James P (July 11, 2008). "Basic Income and the Canadian Welfare State: Exploring the Realms of Possibility". Basic Income Studies3(1). doi:10.2202/1932-0183.1084.
↑ Humphreys၊ Edward (2013)။ Great Candian Battles: Heroism and Courage Through the Years။ Arcturus Publishing။ p. 151။ ISBN 978-1-78404-098-7။
↑ ၆၂.၀ ၆၂.၁ Goddard၊ Lance (2005)။ Canada and the Liberation of the Netherlands။ Dundurn Press။ pp. 225–232။ ISBN 978-1-55002-547-7။
↑ Bothwell၊ Robert (2007)။ Alliance and illusion: Canada and the world, 1945–1984။ UBC Press။ pp. 11, 31။ ISBN 978-0-7748-1368-6။
↑ Boyer၊ J. Patrick (1996)။ Direct Democracy in Canada: The History and Future of Referendums။ Dundurn။ p. 119။ ISBN 978-1-4597-1884-5။
↑ Mackey၊ Eva (2002)။ The house of difference: cultural politics and national identity in Canada။ University of Toronto Press။ p. 57။ ISBN 978-0-8020-8481-1။
↑ Landry, Rodrigue (May 2007). "Official language minorities in Canada: an introduction". International Journal of the Sociology of Language 2007 (185): 1–9. doi:10.1515/IJSL.2007.022.
↑ Esses, Victoria M (July 1996). "Multiculturalism in Canada: Context and current status". Canadian Journal of Behavioural Science 28 (3): 145–152. doi:10.1037/h0084934.
↑ Sarrouh၊ Elissar (January 22, 2002)။ Social Policies in Canada: A Model for Development။ Social Policy Series, No. 1 14–16, 22–37။ United Nations။ 1 February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၉.၀ ၆၉.၁ Bickerton, James; Gagnon, Alain, ed. (2004)။ Canadian Politics (4th ed.)။ Broadview Press။ pp. 250–254, 344–347။ ISBN 978-1-55111-595-5။ CS1 maint: multiple names: editors list (link)
↑ Légaré, André (2008). "Canada's Experiment with Aboriginal Self-Determination in Nunavut: From Vision to Illusion". International Journal on Minority and Group Rights 15 (2–3): 335–367. doi:10.1163/157181108X332659.
↑ Munroe, HD (2009). "The October Crisis Revisited: Counterterrorism as Strategic Choice, Political Result, and Organizational Practice". Terrorism and Political Violence 21 (2): 288–305. doi:10.1080/09546550902765623.
↑ ၇၂.၀ ၇၂.၁ Sorens, J (December 2004). "Globalization, secessionism, and autonomy". Electoral Studies 23 (4): 727–752. doi:10.1016/j.electstud.2003.10.003.
↑ Leblanc၊ Daniel။ "A brief history of the Bloc Québécois"၊ August 13, 2010။ November 25, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Betz၊ Hans-Georg; Immerfall၊ Stefan (1998)။ The new politics of the Right: neo-Populist parties and movements in established democracies။ St. Martinʼs Press။ p. 173။ ISBN 978-0-312-21134-9။
↑ Schmid၊ Carol L. (2001)။ The Politics of Language : Conflict, Identity, and Cultural Pluralism in Comparative Perspective: Conflict, Identity, and Cultural Pluralism in Comparative Perspective။ Oxford University Press။ p. 112။ ISBN 978-0-19-803150-5။
↑ Commission of Inquiry into the Investigation of the Bombing of Air India Flight 182။ Government of Canada။ June 22, 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sourour၊ Teresa K (1991)။ Report of Coroner's Investigation (PDF)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Roach၊ Kent (2003)။ September 11: consequences for Canada။ McGill-Queen's University Press။ pp. 15, 59–61, 194။ ISBN 978-0-7735-2584-9။
↑ "The Oka Crisis" (Digital Archives)၊ CBC။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canada and Multilateral Operations in Support of Peace and Stability။ National Defence and the Canadian Forces (2010)။6March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 2, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UNPROFOR။ Royal Canadian Dragoons။ 14 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 24, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Canada and the war in Afghanistan: NATO's odd man out steps forward" (2008). Journal of Transatlantic Studies6(1): 100–115. doi:10.1080/14794010801917212.
↑ Canada Recession: Global Recovery Still Fragile3Years On။ Huffington Post (July 22, 2012)။ September 1, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canadian economy showing signs of wider recovery, Stephen Poloz says။ Toronto Star (December 3, 2014)။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Canada's military contribution in Libya"၊ CBC၊ October 20, 2011။ November 27, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၆.၀ ၈၆.၁ Canada exchanges fire with Islamic State in Iraq။ BBC (January 19, 2015)။ February 9, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၇.၀ ၈၇.၁ ၈၇.၂ ၈၇.၃ Canada။ World Factbook။ CIA (May 16, 2006)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Niels West (2004)။ Marine Affairs Dictionary: Terms, Concepts, Laws, Court Cases, and International Conventions and Agreements။ Greenwood Publishing Group။ p. 31။ ISBN 978-0-313-30421-7။
↑ Canadian Geographic။ Royal Canadian Geographical Society။ 2008။ p. 20။
↑ The Boundary။ International Boundary Commission (1985)။ May 17, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ National Atlas of Canada။ Natural Resources Canada။ 2005။ p. 1။ ISBN 978-0-7705-1198-2။
↑ I.e., lakes over ၃ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၀၀ ဟက်တာ) in area. Thomas V. Cech (2010)။ Principles of Water Resources: History, Development, Management, and Policy။ John Wiley & Sons။ p. 83။ ISBN 978-0-470-13631-7။
↑ Bailey၊ William G; Oke, TR; Rouse, Wayne R (1997)။ The surface climates of Canada။ McGill-Queen's University Press။ p. 124။ ISBN 978-0-7735-1672-4။
↑ Etkin၊ David; Haque, CE; Brooks, Gregory R (April 30, 2003)။ An Assessment of Natural Hazards and Disasters in Canada။ Springer။ pp. 569, 582, 583။ ISBN 978-1-4020-1179-5။
↑ Jessop, A။ Geological Survey of Canada, Open File 5906။ Natural Resources Canada။ pp. 18–။ GGKEY:6DLTQFWQ9HG။
↑ Peter H. McMurry; Marjorie F. Shepherd; James S. Vickery (2004)။ Particulate Matter Science for Policy Makers: A NARSTO Assessment။ Cambridge University Press။ p. 391။ ISBN 978-0-521-84287-7။
↑ The Weather Network။ Statistics, Regina SK။ January 5, 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ January 18, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canadian Climate Normals or Averages 1971–2000။ Environment Canada (March 25, 2004)။ 18 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Queen Victoria (March 29, 1867). "Constitution Act, 1867: Preamble". Queen's Printer. Retrieved on May 23, 2011.
↑ Smith၊ David E။ "The Crown and the Constitution: Sustaining Democracy?"၊ Queen's University၊ June 10, 2010၊ စာ- 6။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 17 June 2010။
↑ ၁၀၁.၀ ၁၀၁.၁ MacLeod၊ Kevin S (2012)။ A Crown of Maples (PDF) (2nd ed.)။ Queen's Printer for Canada။ p. 16။ ISBN 978-0-662-46012-1။ 10 November 2012 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ The Governor General of Canada: Roles and Responsibilities။ Queen's Printer။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Commonwealth public administration reform 2004။ Commonwealth Secretariat။ 2004။ pp. 54–55။ ISBN 978-0-11-703249-1။
↑ ၁၀၄.၀ ၁၀၄.၁ ၁၀၄.၂ Forsey၊ Eugene (2005)။ How Canadians Govern Themselves (PDF) (6th ed.)။ Queen's Printer။ pp. 1, 16, 26။ ISBN 978-0-662-39689-5။ 15 January 2011 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀၅.၀ ၁၀၅.၁ Marleau၊ Robert။ House of Commons Procedure and Practice: Parliamentary Institutions။ Queen's Printer။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Prime Minister of Canada။ Queen's Printer (2009)။ 19 April 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Johnson၊ David (2006)။ Thinking government: public sector management in Canada (2nd ed.)။ University of Toronto Press။ pp. 134–135, 149။ ISBN 978-1-55111-779-9။
↑ The Opposition inaParliamentary System။ Library of Parliament။ 25 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ O'Neal, Brian; Bédard, Michel; Spano, Sebastian (April 11, 2011)။ Government and Canada's 41st Parliament: Questions and Answers။ Library of Parliament။ 22 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 2, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ann L. Griffiths; Karl Nerenberg (2003)။ Handbook of Federal Countries။ McGill-Queen's Press။ p. 116။ ISBN 978-0-7735-7047-4။
↑ Differences from Provincial Governments။ Legislative Assembly of the Northwest Territories (2008)။ January 30, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dinçer, Hasan (2013)။ Global Strategies in Banking and Finance။ IGI Global။ p. 69။ ISBN 978-1-4666-4636-0။
↑ About။ Statistics Canada (2014)။ February 14, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bakan၊ Joel; Elliot, Robin M (2003)။ Canadian Constitutional Law။ Emond Montgomery Publications။ pp. 3–8, 683–687, 699။ ISBN 978-1-55239-085-6။
↑ ၁၁၅.၀ ၁၁၅.၁ ၁၁၅.၂ Patterson, Lisa Lynne (2004). "Aboriginal roundtable on Kelowna Accord: Aboriginal policy negotiations 2004–2006". Parliamentary Information and Research Service, Library of Parliament. Retrieved on October 23, 2014.
↑ Treaty areas။ Treasury Board of Canada Secretariat (October 7, 2002)။ 22 January 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gary Brent Madison (2000)။ Is ThereaCanadian Philosophy?: Reflections on the Canadian Identity။ University of Ottawa Press။ p. 128။ ISBN 978-0-7766-0514-2။
↑ McCormick၊ Peter (2000)။ Supreme at last: the evolution of the Supreme Court of Canada။ James Lorimer & Company Ltd။ pp. 2, 86, 154။ ISBN 978-1-55028-692-2။
↑ Richard Yates; Penny Bain; Ruth Yates (2000)။ Introduction to law in Canada။ Prentice Hall Allyn and Bacon Canada။ p. 93။ ISBN 978-0-13-792862-0။
↑ Sworden၊ Philip James (2006)။ An introduction to Canadian law။ Emond Montgomery Publications။ pp. 22, 150။ ISBN 978-1-55239-145-7။
↑ Ontario Provincial Police။ OPP official website (2009)။ October 24, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Royal Canadian Mounted Police။ Keeping Canada and Our Communities Safe and Secure။ Queen's Printer။ July 6, 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Military Strength of Canada။ Global Firepower (March 27, 2014)။ January 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canadian military spending by the numbers။ Ottawa Citizen (September 3, 2014)။ January 25, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Military expenditure of Canada။ SIPRI (2011)။3May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 3, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Haglung, David G (Autumn 2003). "North American Cooperation in an Era of Homeland Security". Orbis 47 (4): 675–691. Foreign Policy Research Institute. doi:10.1016/S0030-4387(03)00072-3.
↑ Canada။ United States Department of State (2014)။ 13 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ James၊ Patrick (2006)။ Michaud, Nelson; O'Reilly, Marc J (ed.)။ Handbook of Canadian Foreign Policy။ Lexington Books။ pp. 213–214, 349–362။ ISBN 978-0-7391-1493-3။ CS1 maint: multiple names: editors list (link)
↑ Teigrob, Robert (September 2010). "'Which Kind of Imperialism?' Early Cold War Decolonization and Canada–US Relations". Canadian Review of American Studies 37 (3): 403–430. doi:10.3138/cras.37.3.403.
↑ Canada's international policy statement:arole of pride and influence in the world။ Government of Canada။ 2005။ ISBN 978-0-662-68608-8။
↑ Finkel၊ Alvin (1997)။ Our lives: Canada after 1945။ Lorimer။ pp. 105–107, 111–116။ ISBN 978-1-55028-551-2။
↑ Holloway၊ Steven Kendall (2006)။ Canadian foreign policy: defining the national interest။ University of Toronto Press။ pp. 102–103။ ISBN 978-1-55111-816-1။
↑ Farnsworth၊ Clyde H။ "Torture by Army Peacekeepers in Somalia Shocks Canada"၊ November 27, 1994။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Peter McKenna (2012)။ Canada Looks South: In Search of an Americas Policy။ University of Toronto Press။ p. 91။ ISBN 978-1-4426-1108-5။
↑ Ibp Usa။ Canada Intelligence, Security Activities and Operations Handbook Volume 1 Intelligence Service Organizations, Regulations, Activities။ Int'l Business Publications။ p. 27။ ISBN 978-0-7397-1615-1။
↑ Murray Brewster။ "Canada lost Afghan war, says author"၊ Canada free press (iPOLOTICS)၊ September 27, 2013။ January 23, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vagnoni၊ Giselda။ "Rich nations to sign $1.5 bln vaccine pact in Italy"၊ Reuters၊ February 5, 2007။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Blomfield၊ Adrian။ "Russia claims North Pole with Arctic flag stunt"၊ August 3, 2007။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Canada's Libya mission to end in2weeks"၊ CBC၊ October 20, 2011။ December 30, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Nine strikes in 50 days: Canadian military defends Iraq bombing record"၊ The Globe and Mail၊ December 18, 2014။ February 14, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Adam Chapnick (2011)။ The Middle Power Project: Canada and the Founding of the United Nations။ UBC Press။ pp. 2–5။ ISBN 978-0-7748-4049-1။
↑ International Organizations and Forums။ Foreign Affairs, Trade and Development Canada (2013)။ 27 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 3, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ International Covenant on Civil and Political Rights။ United Nations (2014)။ March 3, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ G. Bruce Doern; Allan M. Maslove; Michael J. Prince (2013)။ Canadian Public Budgeting in the Age of Crises: Shifting Budgetary Domains and Temporal Budgeting။ MQUP။ p. 1။ ISBN 978-0-7735-8853-0။
↑ Jason Clemens; Niels Veldhuis (2012)။ Beyond Equalization: Examining Fiscal Transfers inaBroader Context။ The Fraser Institute။ p. 8။ ISBN 978-0-88975-215-3။
↑ Report for selected Country – Canada။ International Monetary Fund (2015)။ May 22, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Latest release။ World Trade Organization (April 17, 2008)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Index of Globalization 2010။ KOF။ May 22, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Index of Economic Freedom။ Heritage Foundation/Wall Street Journal (2013)။ June 27, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jonathan Kay: The key to Canada's economic advantage over the United States? Less income inequality။ National Post (December 13, 2012)။ December 14, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅၁.၀ ၁၅၁.၁ Canada။ OECD Better Life Index။ OECD (2014)။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ TMX Group Equity Financing Statistics – September 2014။ TMX (September 2014)။ February 7, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Imports, exports and trade balance of goods onabalance-of-payments basis, by country or country grouping။ Statistics Canada (2014)။ 28 April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 7, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Grant၊ Tavia။ "Canada has first yearly trade deficit since 1975"၊ February 10, 2010။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canada's Trade Deficit Widens။ Wall Street Journal (February 7, 2015)။
↑ Employment by Industry။ Statistics Canada (January 8, 2009)။ 24 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Easterbrook, WT (March 1995). "Recent Contributions to Economic History: Canada". Journal of Economic History 19.
↑ ၁၅၈.၀ ၁၅၈.၁ Brown၊ Charles E (2002)။ World energy resources။ Springer။ pp. 323, 378–389။ ISBN 978-3-540-42634-9။
↑ World proven crude oil reserves by country, 1960–2011။ Organization of the Petroleum Exporting Countries (2012)။5September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Oil & Gas Journal's oil reserve estimate for Canada includes ၅.၃၉၂ billion barrels (၈၅၇,၃၀၀,၀၀၀ ကုဗမီတာ) of conventional crude oil and condensate reserves and ၁၇၃.၂ billion barrels (၂.၇၅၄×၁၀၁၀ ကုဗမီတာ) of oil sands reserves. Information collated by the EIA”
↑ ၁၆၀.၀ ၁၆၀.၁ Britton၊ John NH (1996)။ Canada and the Global Economy: The Geography of Structural and Technological Change။ McGill-Queen's University Press။ pp. 26–27, 155–163။ ISBN 978-0-7735-1356-3။
↑ Zinc Production by Country (Metric tons, zinc content of concentrate and direct shipping ore, unless otherwise specified)။ United States Geological Survey data via Index Mundi (2009)။ May 14, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statistics။ Natural Resources Canada။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Leacy, FH:Vl-12။ Statistics Canada (1983)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dr David Mosler; Professor Bob Catley (2013)။ The American Challenge: The World Resists US Liberalism။ Ashgate Publishing, Ltd.။ p. 38။ ISBN 978-1-4094-9852-0။
↑ Morck၊ Randall; Tian, Gloria; Yeung, Bernard (2005)။ "Who owns whom? Economic nationalism and family controlled pyramidal groups in Canada"။ in Eden, Lorraine; Dobson, Wendy (eds.)။ Governance, multinationals, and growth။ Edward Elgar Publishing။ p. 50။ ISBN 978-1-84376-909-5။ Cite uses deprecated parameter |editors= (အကူအညီ)
↑ Hale, Geoffrey (October 2008). "The Dog That Hasn't Barked: The Political Economy of Contemporary Debates on Canadian Foreign Investment Policies". Canadian Journal of Political Science 41 (3): 719–747. doi:10.1017/S0008423908080785.
↑ David Johnson (2006)။ Thinking Government: Public Sector Management in Canada။ University of Toronto Press။ p. 374။ ISBN 978-1-55111-779-9။
↑ Sturgeon၊ Jamie (March 13, 2009)။ Jobless rate to peak at 10%: TD။ National Post။ 1 February 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Latest release from Labour Force Survey။ Statistics Canada (November 6, 2009)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yalnizyan၊ Armine။ "The real state of Canada's jobs market"၊ October 15, 2010။ December 12, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Budget fights deficit with freeze on future spending။ CTV News (March 4, 2010)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canada's international investment position။ The Daily။ Statistics Canada (June 17, 2010)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canada's Budget Triumph (PDF)။ Mercatus Center (George Mason University) (September 30, 2010)။ July 15, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Update of Economic and Fiscal Projections။ Department of Finance Canada (2013)။ 22 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IMF drops forecast for Canadian economic growth။ CTV News (January 20, 2015)။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canada's Trade with the World, by Region။ Asia Pacific Foundation of Canada (March 24, 2014)။ 14 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 18, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Minister Fast Congratulates the Organizers of the Canada and Free Trade with Asia Conference။ Canadian International Council (2013)။ 22 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Northern Gateway pipeline would strengthen trade ties to China"၊ The Globe and Mail၊ May 7, 2012။ August 19, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pipeline economics: China needs oil, and Canada's got it။ Macleans.ca (September 25, 2012)။3December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ December 4, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Domestic spending on research and development။ Statistics Canada (October 17, 2014)။ February 7, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canadian Nobel Prize in Science Laureates။ Science.ca။ February 7, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Note that this source was published before 2011 and as such does not include Ralph M. Steinman.
↑ ၁၈၂.၀ ၁၈၂.၁ Rockefeller University scientist Ralph Steinman, honored today with Nobel Prize for discovery of dendritic cells, dies at 68။ Rockefeller University (October 3, 2011)။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 September 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Top 250 Canadian Technology Companies။ Branham Group Inc (2014)။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Internet Usage and Population in North America။ Internet World Stats (June 2014)။ February 7, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alouette I and II။ CSA။ November 30, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Canada's astronauts"၊ CBC News၊ October 26, 2010။ December 8, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Canadian Aerospace Industry praises the federal government for recognizing Space asastrategic capability for Canada။ Newswire။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Black Brant Sounding Rockets။ Magellan Aerospace (2013)။ 13 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2011 Census: Population and dwelling counts။ Statistics Canada (February 8, 2012)။ February 8, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Green, Jeff။ "Canada's population hits 35 million"၊ December 6, 2012။ September 16, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Barry Edmonston; Eric Fong (2011)။ The Changing Canadian Population။ McGill-Queen's Press။ p. 181။ ISBN 978-0-7735-3793-4။
↑ National Household Survey Profile။ Statistics Canada (2011)။ February 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Religions in Canada—Census 2011။ Statistics Canada/Statistique Canada။
↑ Custred၊ Glynn (2008)။ "Security Threats on America's Borders"။ in Moens, Alexander (ed.)။ Immigration policy and the terrorist threat in Canada and the United States။ Fraser Institute။ p. 96။ ISBN 978-0-88975-235-1။
↑ Urban-rural population asaproportion of total population, Canada, provinces, territories and health regions။ Statistics Canada (2001)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Martel၊ Laurent (September 22, 2009)။ 2006 Census: Portrait of the Canadian Population in 2006, by Age and Sex။ Statistics Canada။ October 18, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Canadian population creeps up in average age"၊ CBC၊ September 28, 2011။ April 11, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2013 Human Development Index and its components – Statistics (PDF)။ UNDP (2013)။ March 15, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The most educated countries in the world။ NBC (2012)။ April 25, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "And the World's Most Educated Country Is..." (September 27, 2012). Time (magazine). Retrieved on September 28, 2014.
↑ Overview of Education in Canada။ Council of Ministers of Education, Canada။ January 5, 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 20, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Creating Opportunities for All Canadians။ Department of Finance Canada (November 14, 2005)။ 23 April 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ May 22, 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Comparing countries' and economies' performances။ OECD (2009)။ May 22, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Canadian education among best in the world: OECD။ CTV News (December 7, 2010)။ February 15, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zimmerman၊ Karla (2008)။ Canada (10th ed.)။ Lonely Planet Publications။ p. 51။ ISBN 978-1-74104-571-0။
↑ Canada welcomes highest number of legal immigrants in 50 years while taking action to maintain the integrity of Canada's immigration system။ Citizenship and Immigration Canada (February 13, 2011)။ 22 December 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ February 11, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Supplementary Information to the 2015 Immigration Levels Plan။ Citizenship and Immigration Canada။ February 1, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Immigration overview – Permanent and temporary residents။ Citizenship and Immigration Canada (2012)။ February 11, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Herbert G. Grubel (2009)။ The Effects of Mass Immigration on Canadian Living Standards and Society။ The Fraser Institute။ p. 5။ ISBN 978-0-88975-246-7။
↑ Government of Canada Tables 2011 Immigration Plan။ Canada News Centre။3December 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ December 12, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alan Simmons (2010)။ Immigration and Canada: Global and Transnational Perspectives။ Canadian Scholars' Press။ p. 92။ ISBN 978-1-55130-362-8။
↑ Ethnocultural Portrait of Canada – Data table။ Statistics Canada (July 28, 2009)။ May 23, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aboriginal Identity (8), Sex (3) and Age Groups (12) for the Population of Canada, Provinces, Territories, Census Metropolitan Areas and Census Agglomerations, 2006 Census – 20% Sample Data။ 2006 Census: Topic-based tabulations။ Statistics Canada (June 12, 2008)။ September 18, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Anita Kalunta-Crumpton; Texas Southern University (2012)။ Race, Ethnicity, Crime and Criminal Justice in the Americas။ Palgrave Macmillan။ p. 12။ ISBN 978-0-230-35586-6။
↑ 2006 Census: Ethnic origin, visible minorities, place of work and mode of transportation။ The Daily။ Statistics Canada (April 2, 2008)။ January 19, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pendakur၊ Krishna။ Visible Minorities and Aboriginal Peoples in Vancouver's Labour Market။ Simon Fraser University။ 16 May 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 30, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2006 Census: Immigration, citizenship, language, mobility and migration။ The Daily။ Statistics Canada (December 4, 2007)။ October 19, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lilley၊ Brian (2010)။ Canadians want immigration shakeup။ Parliamentary Bureau။ Canadian Online Explorer။ November 14, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Friesen၊ Joe။ "The changing face of Canada: booming minority populations by 2031"၊ March 9, 2010။ May 14, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 'No Religion' Is Increasingly Popular For Canadians: Report။ Huffington Post (May 15, 2013)။ May 19, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Religions in Canada—Census 2011။ Statistics Canada/Statistique Canada (2011)။ May 19, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dr. David M. Haskell (Wilfrid Laurier University) (2009)။ ThroughaLens Darkly: How the News Media Perceive and Portray Evangelicals။ Clements Publishing Group။ p. 50။ ISBN 978-1-894667-92-0။
↑ Kevin Boyle; Juliet Sheen (2013)။ Freedom of Religion and Belief: A World Report။ University of Essex – Routledge။ p. 219။ ISBN 978-1-134-72229-7။
↑ Richard Moon (2008)။ Law and Religious Pluralism in Canada။ UBC Press။ pp. 1–4။ ISBN 978-0-7748-1497-3။
↑ Official Languages and You။ Office of the Commissioner of Official Languages (June 16, 2009)။ September 10, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၂၇.၀ ၂၂၇.၁ 2006 Census: The Evolving Linguistic Portrait, 2006 Census: Highlights။ Statistics Canada, Dated 2006။ October 12, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population by knowledge of official language, by province and territory။ Statistics Canada (2006)။ May 26, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bourhis, Richard Y (May 2007). "Language planning and French-English bilingual communication: Montreal field studies from 1977 to 1997". International Journal of the Sociology of Language 2007 (185): 187–224. doi:10.1515/IJSL.2007.031.
↑ Hayday၊ Matthew (2005)။ Bilingual Today, United Tomorrow: Official Languages in Education and Canadian Federalism။ McGill-Queen's University Press။ p. 49။ ISBN 978-0-7735-2960-1။
↑ Heller၊ Monica (2003)။ Crosswords: language, education and ethnicity in French Ontario။ Mouton de Gruyter။ pp. 72, 74။ ISBN 978-3-11-017687-2။
↑ Aboriginal languages။ Statistics Canada။ October 5, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Olive Patricia Dickason (1992)။ Canada's First Nations: A History of Founding Peoples from Earliest Times။ University of Oklahoma Press။ p. 419။ ISBN 978-0-8061-2439-1။
↑ Fettes၊ Mark; Norton, Ruth (2001)။ "Voices of Winter: Aboriginal Languages and Public Policy in Canada"။ in Castellano, Marlene Brant; Davis, Lynne; Lahache, Louise (ed.)။ Aboriginal education: fulfilling the promise။ UBC Press။ p. 39။ ISBN 978-0-7748-0783-8။ CS1 maint: multiple names: editors list (link)
↑ Russell၊ Peter H (2005)။ "Indigenous Self-Determination: Is Canada as Good as it Gets?"။ in Hocking, Barbara (ed.)။ Unfinished constitutional business?: rethinking indigenous self-determination။ Aboriginal Studies Press။ p. 180။ ISBN 978-0-85575-466-2။
↑ What Languages Do Canadians Speak? Language Statistics From the 2011 Census of Canada။ About.com: Canada Online (October 31, 2012)။ November 26, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population by mother tongue, by province and territory။ Statistics Canada (January 2013)။ July 4, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rand Dyck (2011)။ Canadian Politics။ Cengage Learning။ p. 88။ ISBN 978-0-17-650343-7။
↑ Franklin၊ Daniel P; Baun၊ Michael J (1995)။ Political culture and constitutionalism:acomparative approach။ Sharpe။ p. 61။ ISBN 978-1-56324-416-2။
↑ Garcea, Joseph (January 2009). "Multiculturalism Discourses in Canada". Canadian Ethnic Studies 40 (1): 1–10. doi:10.1353/ces.0.0069.
↑ Bricker၊ Darrell; Wright၊ John (2005)။ What Canadians think about almost everything။ Doubleday Canada။ pp. 8–28။ ISBN 978-0-385-65985-7။
↑ Magocsi၊ Paul R (2002)။ Aboriginal peoples of Canada:ashort introduction။ University of Toronto Press။ pp. 3–6။ ISBN 978-0-8020-3630-8။
↑ Mandate of the National Film Board။ National Film Board of Canada (2005)။7March 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ October 20, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Brock, Richard (2008). "Envoicing Silent Objects: Art and Literature at the Site of the Canadian Landscape". Canadian Journal of Environmental Education 13 (2): 50–61.
↑ Hill၊ Charles C (1995)။ The Group of Seven – Art foraNation။ National Gallery of Canada။ pp. 15–21, 195။ ISBN 978-0-7710-6716-7။
↑ Newlands၊ Anne (1996)။ Emily Carr။ Firefly Books။ pp. 8–9။ ISBN 978-1-55209-046-6။
↑ Pamela R. Stern (June 30, 2010)။ Daily life of the Inuit။ ABC-CLIO။ p. 151။ ISBN 978-0-313-36311-5။
↑ Dorland၊ Michael (1996)။ The cultural industries in Canada: problems, policies and prospects။ J. Lorimer။ p. 95။ ISBN 978-1-55028-494-2။
↑ Edwardson၊ Ryan (2008)။ Canadian content, culture and the quest for nationhood။ University of Toronto Press။ p. 127။ ISBN 978-0-8020-9759-0။
↑ Adam Jortner (2011)။ The Gods of Prophetstown: The Battle of Tippecanoe and the Holy War for the American Frontier။ Oxford University Press။ p. 217။ ISBN 978-0-19-976529-4။
↑ 'O Canada'။ Historica-Dominion။ November 27, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hymne national du Canada။ Canadian Heritage (June 23, 2008)။ June 26, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Henry Roxborough, "The Beginning of Organized Sport in Canada", Canada (1975) 2#3 pp 30–43
↑ Vancouver 2010။ The Vancouver Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games (2009)။ October 20, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၅၅.၀ ၂၅၅.၁ Canadian Heritage (2002)။ Symbols of Canada။ Canadian Government Publishing။ ISBN 978-0-660-18615-3။
↑ Ruhl, Jeffrey (January 2008). "Inukshuk Rising". Canadian Journal of Globalization 1 (1): 25–30.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကနေဒါနိုင်ငံ&oldid=650557" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မတ် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။